NEWS COLLECTION: January 2009
တြိဂံတိုင်းမှူး ၀ နှင့် မိုင်းလား နယ်ခြား၌ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး စစ်ရေးပြင်ဆင်
သျှမ်းသံတော်ဆင့် 31 ဇန်န၀ါရီ 2009
ယခုလနှောင်းပိုင်းက တြိဂံတိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဖြိုး မိုင်းယန်းမြို့၌ ညအိပ်၍ UWSA တပ်ဖွဲ့ နှင့် မိုင်းလားအဖွဲ့ ထိန်းချုပ်နယ်မြေ နအဖ အခြေချ နယ်ခြားစခန်းများ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး စစ်ရေးပြင်ဆင်ခဲ့ကြောင်း တရုပ်နယ်စပ် သတင်းကဆိုသည်။
ယခုလလယ်ပိုင်းတွင် စရဖ လုံခြုံရေးအရာရှိချုပ် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်နှင့် အဖွဲ့ ၀ ဌာနချုပ်အသွား မိုင်းပေါက်၌ ၀ နယ်ခြား စောင့် တပ်ဖွဲ့က ၎င်းတို့အဖွဲ့ပါလာသောလက်နက်ကြီးများဖြုတ်သိမ်းသည့်နောက်ပိုင်း ကျိုင်းတုံအခြေစိုက် နအဖ တြိဂံတိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ဖြိုးသည် ကျိုင်းတုံမြို့ အရှေ့မြောက်ဘက် ၁၀၂ ကီလိုမီတာ အကွာရှိ မိုင်းယန်းမြို့သို့ ညအိပ်ခရီးထွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုခရီးစဉ် တွင် အခြေချ တပ်စခန်းများ လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်၊ လူအင်အား၊ စားနပ် ရိက္ခာဖြည့်တင်းမှုကို အထူးအလေးထားကြည့်ရှုစစ် ဆေးခဲ့ကြောင်း၊ ထို့အတူ ကျိုင်းတုံမြို့နယ် အနောက်ဖက် နှင့် မိုင်းပြင်းမြို့နယ် မြောက်ဖက် မက်မန်းမြို့နယ် အတွင်းတွင်လည်း နအဖ အင်အားဖြည့်တင်းမှုရှိကြောင်း -ဒေသခံများ ကဆိုသည်။
ဂျန္န၀ါရီလ ၂၉ မှ ၃၀ အထိ တြိဂံတိုင်းမှူး၏ ထူးခြားသော ညအိပ်ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသက် ၄၀ ကျော် ဒေသခံ ကုန်သည် တဦးက -“အရင်တုန်းကဆို နအဖ အရာရှိကြီးတွေ မိုင်းယန်းမှာ ညအိပ်တယ်ဆိုတာ သိပ်ရှားတယ်။ အခုက လာအိပ်ပြီး တပ်စခန်းအဟောင်း အသစ်တွေ စစ်ဆေးတယ်။ အင်အားထပ်ဖြည့်တယ်။ အရင်က မိုင်းယန်းမှာ ဗမာစစ်သား သိပ်မများဘူး။ မိုးနှောင်းချိန် ကနေ အခုအထိ အင်အားသိသိသာသာများလာတယ်။ လက်နက်ကြီးတွေတောင်လာ တပ်ဆင်နေတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒေသခံတွေတော့ တိုက်ပွဲဖြစ်မှာကို အရမ်းစိုးရိမ်နေကြတယ်” - ဟုဆို၏။
ဦးစိုင်းလင်းခေါင်းဆောင်သော အထူးဒေသ ၄ National Democratic Alliance Army – Eastern Shan State NDAA –ESS မိုင်းလား အဖွဲ့ နှင့် အထူးဒေသ (United Wa State Army) UWSA ၀ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် တို့လည်း စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများ အဆက်မပြတ်လုပ်နေကြောင်း ဆိုပါသည်။
ထိုဒေသရောက် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရလူငယ်တဦးက -“တောင်ပိုင်းဝတပ်ဖွဲ့တွေ စစ်အစိုးရရဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက် မှာ နယ်ခြားကာကွယ်ရေးတပ် တပ်ဖွဲ့လုပ်ဖို့ သဘောတူညီချက်ရထားသလိုလို ဆိုတော့နအဖက သူတို့တွေ ကိုပို မျက်နှာသာ ပေးထား တာတွေ့ရတယ်။ မိုင်းလားအဖွဲ့နဲ့ မြောက်ပိုင်း ၀ အဖွဲ့ကိုပညာပြတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောလား တော့မသိဘူး”- ဟု သျှမ်းသံတော် ဆင့်ကို ပြောပြ၏။
ထို့အတူ ကျိုင်းတုံမြို့ရှိ အထူးဒေသ ၄ မိုင်းလားအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ် စိုင်းစိုးဝင်း ဆိုသူကိုလည်း ပါတီထောင်ပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ပါဝင်ရေး အပါအ၀င် တပ်ဖွဲ့စည်းမှု ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်နေရေးအတွက် ဆွေးနွေးရန် နအဖထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်ကြီးများဆင့်ခေါ်ထားသဖြင့် ယခုလ ၂၇ ရက် ကတည်းက ပျဉ်းမနားကြပ်ပြေး နေပြည်တော်သို့ရောက်နေကြောင်းဆို၏။
၀ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် တပ်မဟာ ၄၆၈ အခြေစိုက် မိုင်းပေါက်ဒေသသည် မိုင်းယန်းမြို့ အနောက် မြောက် ဘက် မိုင် ၃၀ ကျော် အကွာတွင်ရှိပြီး အထူးဒေသ ၂ အတွင်း ခရိုင်အဆင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ စစ်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် မြေတိုင်းဌာန က ထိုဒေသ ကို မိုင်းယန်းမြို့နယ်၏ ကျေးရွာအုပ်စုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောကြောင့် ၀ တပ်ဖွဲ့များတပ်ရုပ်ပေးရန် ယခုချိန်ထိဖိအား ပေးခံနေရ ဆဲဖြစ်သည်။ ထို့အတူ အထူးဒေသ ၄ တပ်မဟာ ၃၆၉ ဌာနချုပ် ဆီလူး လည်း မိုင်းပေါက် နှင့် အလားတူဖြစ်နေသော ကြောင့် မိုင်းယန်းမြို့နယ်အတွင်း နအဖ တပ်များအင်အားဖြည့်ပြီး အထူးအလေးထားလာသောဒေသဖြစ်သည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာအမြင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပဋိပက္ခအတွင်း အပြုသဘော အမြင်ရှိသူများ အခန်းကဏ္ဍ
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဟာ တပ်မတော်နဲ့ အရပ်သား ညွန့်ပေါင်းအစိုးရတရပ် ပေါ်ပေါက်ရေးကို ရှေးရှု တဲ့ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ အသစ်တရပ် ကျင်းပဖို့ အဆိုပြုခဲ့ပါပြီ၊ အဆိုပါ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ပုံစံကို တပ်မတော်အစိုးရ ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ အမျိုးသားညီလာခံမှ ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ဝေဖန်မှု အမျိုးမျိုး ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲနှင့် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က အတည်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ NLD အပါအ၀င် ဆန့်ကျင်သူများအဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ (၁၈) နှစ်အချိန်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရမှုကို ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ အတွက် ရွေးကောက်ပွဲသစ်ကျင်းပမယ့် အလားအလာအပေါ် လက်ခံနိုင်မှု မရှိကြပါ။
ရွေးကောက်ပွဲအသစ်ကို လိုလားသူတဦးအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ စံတွေနဲ့မညီတဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေတရပ်ကို အားပေးထောက်ခံသူအဖြစ်သို့ ကျရောက်သွားမယ့် အလားအလာ တည်ရှိနေပြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အပြုသဘောအမြင်ရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ ပါဝင်မှုဟာ မဟာဗျူဟာအရ မှန်ကန်သလို ရင်ကြားစေ့ဖို့ များစွာလိုအပ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ပဋိပက္ခများ ပြေလည်စေပြီး နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်မှု ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် လက်တွေ့လိုအပ်ချက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုစာတမ်းမှာ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အရေးပါမှုနှစ်၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးကာလတွင် အပြုသဘောအမြင်ရှိသူများက အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ဘယ်နည်းဘယ်ပုံ ပြုစုပျိုးထောင် ပေးနိုင်စရာ အလားအလာတို့ကိုတင်ပြ ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ အနေအထား
အနာဂတ်ကို မစဉ်းစားသေးခင်မှာ အနောက်နိုင်ငံများရဲ့ ထောက်ခံမှုရရှိနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီလိုလား သူများရဲ့လှုပ်ရှားမှူကို ရိုးသားပွင့်လင်းစွာ ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ သုံးသပ်ကြည့်သင့်တယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ယာဉ်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး NLD ကို ဖြိုခွင်းခဲ့မှုဟာ ပဋိပက္ခကို အလှည့်အပြောင်းကာလသို့ ရောက်စေခဲ့တယ်၊ တဘက်တွင် ဒီပဲယင်းဖြစ်ရပ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နာတာရှည် ဝေဒနာပြွမ်းတီးမှုဖြစ်စဉ်အပေါ် အချို့ အတိုက်အခံသမားတွေအဖို့ မိမိတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ပြန်လည် သုံးသပ်လာစေခဲ့တယ်။ ဒီပဲယင်း အဖြစ်အပျက်ဟာ မြန်မာအတိုက်အခံ အသိုင်းအ၀ိုင်းများအကြား အကြီးအကျယ် ဒေါသူပုန်ထသွားစေခဲ့တယ်။ တပ်မတော်အစိုးရကို ပြန်လည်ဒဏ်ခတ်ဖို့ နှိုးဆော်ခဲ့ကြတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရ ထိပ်တန်း တာဝန်ခံအပါအ၀င် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ဝေဖန်မှုတွေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့အတွက် မိမိတို့အပေါ် အနောက်ကမ္ဘာက ထောက်ခံသူများဟာ စိတ်ဓါတ်ရေးအရ အားပေးမှု၊ ငွေကြေး အနည်းအကျဉ်းပံ့ပိုးမှုတွေ ပြုနေတဲ့ အနေအထားမှ ရှေ့ကို တဆင့်တက်တော့မယ်လို့ မြန်မာဆန့်ကျင်ရေးသမားတွေ ယုံကြည်လာခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုဟာ အနောက်ကမ္ဘာအဖို့ စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ရေး အားပေးမှု အဆင့်မှာသာ ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်တွင် စိတ်ဓါတ်ရေး အားပေးမှုဟာ မဟာဗျူဟာမြောက် အရေးပါမှုလောက် တန်ဖိုးမြင့်မားမှု မရှိပါ။ ၁၉၉၈ခုနှစ်တုန်းက ဘီကလင်တန်အစိုးရဟာ အီရတ် အတိုက်အခံများကို ဒေါ်လာသန်း (၁၀၀) ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ဘူးတယ်။ ယခု မြန်မာနိုင်ငံ အတိုက်အခံများကို အမေရိကန်အစိုးရ ထောက်ပံ့မှုဟာ ဒေါ်လာ (၁၀) သန်းမျှသာရှိပြီး အဲဒီအထဲမှာ ဒုက္ခသည်နဲ့ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီတွေလည်း ပါနေပါသေးတယ်။ ဒီပမာဏဟာဖြင့် သမုဒ္ဒရာရေထက် ရေတစက်ကျတာလောက်သာ ရှိပါတယ်။
၂ ဒီပဲယင်းနှိမ်နင်းမှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် နိုင်ငံတကာအားပေးမှုရဲ့ အတိုင်းအတာ ဘယ်လောက် ရှိတယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ ပြလိုက်တာပါပဲ။ မြန်မာဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားအပေါ် အနောက်ရဲ့အားပေးမှုဟာ အစွမ်းကုန်နေပြီ ဒီအတိုင်းအတာထက် မကျော်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာ ပြည်ပအရောက် အတိုက်အခံအချို့ မျက်စိပွင့်လာခဲ့ကြတော့တယ်။
ဒီအရေးမှာ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီက ၀င်ရောက်ဆောင်ရွက်ဖို့ NLD က ပြတ်ပြတ်သားသား တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ ယခုလို အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ပေးဖို့ တောင်းခံလိုက်ရတာကတော့ ပြည်တွင်းမှာ NLD ပါတီရဲ့ စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုကို အစိုးရက ပြင်းထန်စွာ နှိမ်နင်း ချုပ်ကိုင်လိုက်ပြီလို့ ပါတီခေါင်းဆောင်များ သိရှိလာလို ဖြစ်တယ်။ အစိုးရဟာတဘက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည် ရှိသူတွေကို ထိမ်းသိမ်းလိုက်သလို တချိန်တည်းမှာ ပါတီအောက်ခြေ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကိုလည်း ကန့်သတ် ချုပ်ကိုင်လိုက်ပါတော့တယ်။
ပြည်ပရောက် ဆန့်ကျင်သူတွေနဲ့ သူတို့ကို အားပေးထောက်ခံသူတွေဟာ NLD ရဲ့ အရေးပေါ် အသက်ကယ် အကူအညီတောင်းခံမှုကို တက်တက်ကြွကြွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်။ ချက်သမ္မတ ဟောင်း ဘားကလပ်ဟာဘယ်နဲ့ နိုဘယ်ဆုရှင် ဒက်စမွန်တူတူးတို့ ပါဝင်တဲ့ ကော်မရှင်တရပ်ဖွဲ့စည်းပြီး ၀ါရှင်တန်မှာရှိတဲ့ အတိုက်အခံ အဖွဲ့ဝင်ရှေ့နေ အချို့က ရှည်လျားတဲ့ ပန်ကြားစာတစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ မြန်မာအစိုးရဟာ ဒေသလုံခြုံရေးကို ထိပါးအန္တရာယ်ပြုနေပြီလို့ တောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ အားလုံးလောက်က ဒီအဆိုကို ထောက်ခံခြင်း မရှိကြပါ။ အမေရိကန် ပင်တခွန်စစ်ဌာနချုပ်နဲ့ ထောက်လှမ်းရေး နယ်ပယ်တို့ကလည်း ဒီအဆိုကို ထောက်ခံခြင်း မရှိပါ။ တကယ်တော့ ဒါဟာ အစိုးရအပေါ် ပိုမိုဖိအားပေးဖို့ လှုံ့ဆော်မှု သက်သက်မျှသာ ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီမှာ ဒီအဆိုဟာ အောင်မြင်မှုမရမှန်း သိသိကြီးနဲ့ အမေရိကန် ကွန်ကရက်လွှတ်တော်နှင့် ဘွတ်ရ်ှအစိုးရဟာ အတိုက်အခံတွေရဲ့ လိုလားချက်ကို အကောင်အထည်ဖော် ပေးခဲ့ကြတယ်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တုန်းက ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန် ကိုယ်စားလှယ် မယ်ဒလင်အောဘရိုက် နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အလားတူ တောင်းဆိုမှု ပြုခဲ့ဘူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလင်တန် အစိုးရဟာ ဒီအရေးကို ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီအထိ တက်ရောက်ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုနဲ့ တိဘက်လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုတို့ရဲ့ ကံကြမ္မာဟာ တထပ်တည်း ကျနေပါတယ်။ အဆိုပါ လှုပ်ရှားမှုနှစ်ရပ်လုံးဟာ လူအများ သိရှိလာအောင် လှုံ့ဆော်နိုင်တဲ့ အဆင့်အထိတော့ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြတယ် (Awareness Campaigns)၊ ဒါပေမယ့် ဒီစွမ်းဆောင်မှုဟာ နိုင်ငံတကာ ထောက်ခံမှုရရှိရေးတွင် အဆင့်တရပ်မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်လစီမူဝါဒတရပ် လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ရေးမှာ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံများရဲ့ သဘောဆန္ဒပါဝင်မှ ဖြစ်မှာပါ။ မြန်မာ နဲ့ တိဘက်လှုပ်ရှားမှု နှစ်ခုစလုံးဟာ နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာကို ရောက်သွားပြီဆိုရင် အရှိန်အဟုန် ရပ်တန့်သွားကြတာချည်းပါပဲ။
တပ်မတော်အစိုးရဟာလည်း ပြီးခဲ့တဲ့(၈)လအတွင်း အဓိကအကြပ်အတည်းကြီး (၂) ရပ်ကို ရှေ့ဆင့်နောက်ဆက်ဆိုတာလိုကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးတွေဦးဆောင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုဟာ(၁၈) နှစ် အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် လူများစွာကို လမ်းတွေပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တယ်။ နာဂစ်ဆိုက်ကလုံး မုန်တိုင်းဟာ ဆန်စပါးအဓိကစိုက်ပျိုးရာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူ (၁၃၀ယ ၀၀၀)ခန့် သေကျေပျက်စီးစေခဲ့တယ်။ မြန်မာ့သမိုင်းမှာအဆိုးဝါးဆုံး သဘာဝဘေးလည်းဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအကြပ်အတည်း(၂)ရပ်လုံးကို အစိုးရကနိုင်နင်းစွာကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့တယ်။
မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းက ဦးစားပေးတဲ့သာသနာ့ဝန်ထမ်းပင်ဖြစ်ပေစေ ဥပဒေရေးရာနှင့် ပတ် သက်လာရင် မငဲ့မကွက် ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အစိုးရတစ်ရပ်ရဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည် (Institutional
Capacity) ကိုလည်း ပြသခဲ့တယ်။ ဆိုက်ကလုံးမုန်တိုင်းကြောင့် ဒုက္ခဖိစီးမှုများလာပြီး နိုင်ငံရေးထက် စားဝတ်နေရေးဘက်ကိုသာ လူထုတွေဦးစားပေးလာစေခဲ့တယ်။ အဆိုပါအကြပ်အတည်း (၂)ရပ် ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအံတုမှုများကိုလည်း အောင်မြင်စွာချုပ်ထိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်။
၃ တည်ဆဲ တပ်မတော်အစိုးရရဲ့ အနေအထား
ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းရဲ့၁၉၆၂ခုနှစ် တပ်မတော်အာဏာသ်ိမ်းမှုနှင့် တည်ဆဲတပ်မတော်အစိုးရတို့ အကြား မှာကြီးမားတဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှု အခြေခံတရပ်ရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ တပ်မတော်အာဏာသိမ်းပြီး (၁၂) နှစ်အကြာမှာ တပါတီအစိုးရစနစ်အဖြစ်သို့ ဦးနေ၀င်းက အသွင်ကူးပြောင်းကာ မိမိအခြေခံကို ခိုင်မာ အောင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး တည်ဆဲနိုင်ငံတော် အေးချမ်းးသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (SPDC) ကတော့ မိမိတို့ဟာ နိုင်ငံအာဏာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ အစိုးရတရပ်သာ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်။
ဒါ့အပြင် တပ်မတော်အစိုးရဟာ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဆန့်ကျင်သူအများရဲ့ အဆက်မပြတ် ဖိအားပေးမှုကို ယခုအချိန်အထိ တွန်းလှန်ဖယ်ရှားနိုင်စွမ်း ရှိနေဆဲဖြစ်ပေမယ့် တဘက်တွင် အဆိုပါ ဖိအားဟာ ဆက်လက် တည်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပဲယင်းကိစ္စ ဖြစ်ပွါးမှုဟာ တပ်မတော်အစိုးရရဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းရေး လမ်းညွှန်မြေပုံကို အချိန်မဆိုင်းဘဲ ထုတ်ပြန်ကြေညာလာစေခဲ့ပါတယ်။
အသွင်ကူးပြောင်းရေးဟာ အစိုးရဦးဆောင်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေအပေါ်မှာ အခြေစိုက်ထားပြီး ၂၀၀၈ မေတွင် ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ် သင့်နေစဉ် အချိန်အတွင်း လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပ အတည်ပြုခဲ့တယ်။ ပေါ်ပေါက်လာမယ့် ဥပဒေပြု လွှတ်တော်တွင် တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ပြီး တပ်မတော် ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုဟာ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အရပ်သားနိုင်ငံ ရေးသမားများပါဝင်မှု အတိုင်းအတာရယ် အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း ရွေးချယ်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရယ်တို့ အပေါ်မှာ မှီတည်နေပါလိမ့်မယ်။ အစိုးရအဖွဲ့သစ်အတွင်းမှာ ရွေးကောက်ခံရတဲ့ ကိုယ်စားလှယ် များရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ အများကြီးရရှိနိုင်ဖို့ရာ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေက အပ်နှင်းထားပါတယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုဟာ ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ အရပ်သားတွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်မှု အတိုင်းအတာရယ် အစိုးရအဖွဲ့သစ်တွင် သူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍရယ်တို့ အပေါ်မှာ တည်မှီနေပါတယ်။ တပ်မတော် အစိုးရဘက်မှာလည်း အခက်အခဲကြီး (၃) ရပ် ရှိနေပါတယ်။ ပထမ အခက်အခဲကတော့ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ဆင်းဖို့ရာ အရပ်သား နိုင်ငံရေးသမားများကို နိုင်ငံရေးလုပ်ပိုင် ခွင့်ပေးဖို့ ချိန်ဆနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆို ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို လွှတ်ပေးပြီး သူတို့ လိုလားသူများ အကြားမှာ လှုပ်ရှားစည်းရုံးခွင့် ပေးလိုက်မှုက ရလိုက်တဲ့ ခါးသည်းတဲ့ သင်ခန်းစာကြောင့်ပဲ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် သံဃာတော်များ ဦးဆောင်ဆန္ဒပြမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် အလားတူအမှားမျိုး ထပ်မံမကျူးလွန်မိအောင် အစိုးရဘက်က အထူးသတိထားလျက် ရှိတယ်။
ဒုတိယအခက်အခဲကတော့ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD အနိုင်ရနိုင်တဲ့ အလားအလာနဲ့ ပတ်သက်ပါတယ် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ အရပ်သားကိုယ်စားလှယ်များ အကြားတွင် တပ်မတော် ဆန့်ကျင်ရေးသမားတွေ အများစုဖြစ်လာပြီး ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးကာလတွင် တပ်မတော်ကို ထိပ်တိုက်ဆန့်ကျင်မှုပြုဖို့ အတိုက်အခံများကို လှုံဆော်လာနိုင်ပါတယ်။ တနည်းဆိုရရင် လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အပြု သဘောဆောင်သူတွေ ပိုမိုပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရေးကို တပ်မတော်က လိုလားပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို လွှတ်ပေးလိုက်မှုဟာ NLD နှင့် အစိုးရအကြား တတိယအင်အားစု တရပ် ဖန်တီးဖို့ မူလကရည်ရွယ်ရင်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များက ပြင်းထန် တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် သဘောထားဘက်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်။
အစိုးရရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ဟာ NLD အပါအ၀င် သဘောထားပြင်းထန်သူများရဲ့ အရှိန်သြဇာ ကိုလျှော့ချရေးဖြစ်ပုံရတယ်။ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများကို လောလောဆယ်ဖမ်းဆီး နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေ ချမှတ်နေတာဟာ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မှီ သဘောထားတင်းမာသူများကို လမ်းရှင်းထားရေးစီမံချက်ဖြစ် ပုံရတယ်။ တဘက်မှာတော့အတိုက်အခံအင်အားစုများဘက်တွင် အပြုသဘောဆောင်သူတွေတစု တစည်းတည်း ရပ်တည်မလာနိုင်သေးပါ မြန်မာနိုင်ငံရေးဟာ ရန်-ငါ အစွန်းနှစ်ဘက်သာရှိတဲ့ ဆက်ဆံ ၄ ရေး (Nature of Polarization) ဖြစ်နေလို့ အပြုသဘောဆောင်သူ တသီးပုဂ္ဂလများအနေနဲ့ တတိယ အင်အားစုအဖြစ်ရပ်တည်ရေးမှာ လက်နှေးနေကြတယ်။ မြန်မာအတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးနယ်ပါယ်တွင် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို အချောင်သမား၊ အစိုးရအလိုတော်ရှိလို့လွယ်လွယ်ပဲ တံဆိပ်ကပ် ချိုးနှိ်မ်ပြစ်လေ့ရှိတယ်။
တတိယစိုးရိမ်မှုကတော့ အရပ်သားတွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဟာ တပ်မတော်ရဲ့အဓိကဦးတည် ချက်တွေကို ထိပါးလာမယ့်အလားအလာနှင့်ပတ်သက်လို့ပါပဲ အရပ်သားနိုင်ငံရေးသမားတွေအပေါ် မယုံကြည်စိတ်မချနိုင်လို့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ အထိမ်းအကွပ်တွေထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချုပ်ဆိုရလျှင် ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲအပြီးကာလ ပေါ်ပေါက်လာမယ့်အစိုးရသစ်မှာ ရှေ့နောက် ချင့်ချိန်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အရပ်သား လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ မရှိသေးပါ အရပ်သား နိုင်ငံရေးသမားများအပေါ် စိတ်မချနိုင်မှုကတဘက် အပြန်အလှန်မိတ်ဆွေရင်းခြာသဖွယ် ဆက်ဆံရေးမပေါ်ပေါက်သေးတာကလည်း တဘက်ဆိုသလို ကြုံနေရတဲ့အတွက် တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်စုများအကြား ကိုယ့်တပ်ကို အခိုင်အလုံပြုရေးက (Siege mentality) ရှေ့တန်းရောက်လာပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ အထိမ်းအကွပ်တွေ ပိုထည့်လာမှု ဖမ်းဆီးနှိပ်ကွပ်မှုတွေနဲ့ မိမိတို့ရပ်တည်ချက်တွေကို အကာအကွယ်ယူလာပါတော့တယ်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွင်း အရပ်သား အင်အားစုများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြမယ့် တပ်မတော်လိုလားသူအပါအ၀င်အင်အားစုများမှာလာမယ့်ရွေးကောက် ပွဲအပေါ်ထားရှိတဲ့သဘောထားနဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေပေါ်အခြေခံပြီး အရပ်သားနိုင်ငံရေးသမားများအကြား (၄)မျိုး(၄)စားခွဲခြားနိုင်ပါတယ် အတိုက်အခံအများစုကတော့အစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်မြေပုံကို ဆန့်ကျင်နေကြ တယ်။ သူတို့ဟာ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေဦးမှာဖြစ်တယ်။ အဲဒီလိုသဘောထား ပြင်းထန်သူအများစုဟာပြည်ပမှာရှိနေတယ် ပြည်တွင်းသဘောထားပြင်းထန်သူအများစုကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ သံဃာလှုပ်ရှားမှုဖြိုခွင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးပြီဖြစ်တယ်။ အစွန်းရောက်သမားတွေရဲ့သဘော ထားတွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှုအပေါ်အနည်းငယ်သာ အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတော့မယ်။ ဒုတိယအမျိုးအစားကတော့ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကို နောက်တကြိမ်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပွဲအဖြစ် ကျင့်သုံးလိုတဲ့အတိုက်အခံတွေဖြစ်တယ်။ ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ဆက်လက် တောင်းဆိုနေပေမယ့် ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်းကာလတွင် NLD ပါတီ တရားဝင်ရပ်တည်ခွင့်ရရေးလူထုစည်းရုံး လှုပ်ရှားနိုင်ရေးတို့အတွက် NLD ဟာ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်နိုင်စရာရှိပါတယ် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ် ပါတီ(ဗကပ) အပါအ၀င်သဘောထားပြင်းထန်သူများအဖို့ကတော့ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာ ပဋိပက္ခပိုမို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရေးအတွက်စစ်မြေပြင်တရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
တတိယနိုင်ငံရေးအင်အားစုကတော့ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကို မိမိတို့အကျိုးစီးပွားတွေ ဆက် လက်ချဲ့ထွင်ရေးအခွင့်အလမ်းအဖြစ်သဘောထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအဖွဲ့တွေဖြစ်တယ် လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲလွတ်လပ်တရားမျှတမှုရှိမရှိဆိုတာထက် ရွေးကောက်ပွဲမှတဆင့်မိမိတို့ရဲ့ရပ်တည်မှု ပိုမိုခိုင်မာရေးတရားဝင်ဖြစ်လာရေးကို လိုလားကြတယ်။
စတုတ္ထအမျိုးအစားတွင် အပြုသဘောအမြင်ရှိတဲ့ တတိယအင်အားစုတွေအဖြစ်ရပ်တည်လိုတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက တတိယအင်အားစုအဖြစ်ခံယူထားကြတဲ့ တသီးပုဂ္ဂလများဟာ NLD မဟုတ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူများဖြစ်ပြီး စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့မှုကိုလိုလားတဲ့ NLD ရဲ့သဘောထား ရယ် အစိုးရနှင့်ထိပ်တိုက်တွေ့ရေးရယ်တို့ကို မနှစ်သက်သူတွေဖြစ်တယ်။ အပြုသဘောအမြင်ရှိသူများ အဖြစ်ခံယူထားကြပြီး NLD ဦးဆောင်တဲ့အတိုက်အခံလှုပ်ရှားမှုဟာ အရေးနိမ့်နေပြီလို့ ယူဆထားကြသူ တွေပဲ အဲဒီအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားဟောင်းများ၊ NLD မှ ရွေးချယ်ခံလွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်များ၊ လတ်တလောဖွဲ့စည်းထားတဲ့ြွဥ အဖွဲ့တာဝန်ခံများ ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေးသမား များ ပါဝင်ကြတယ် သူတို့အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတရပ်အဖြစ် တလုံးတစည်းတည်း ပေါ်ထွက် မလာသေးပေမယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီး ယှဉ်ပြိုင်မယ့် အလားအလာရှိနေပါတယ်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးကာလတွင် နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှု ပေါ်ပေါက်နိုင်စရာအလားအလာ
တည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ပေါ်ထွက်လာမယ့် နိုင်ငံတော် အစိုးရပုံစံဟာ ရာနှုန်းပြည့်ဒီမိုကရေစီစနစ်မျိုးဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ ၁၉၅၅ ခုနှစ်မှ ယနေ့အချိန်အထိ ကမ္ဘာ အ၀ှမ်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုများကိုလေ့လာဆန်းစစ်ချက်အရခေတ်စနစ်တရပ်သို့ အသွင်ကူးပြောင်းသည့် ကြားကာလတွင် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအပြည့်အ၀ကျင့်သုံးခြင်းမရှိတဲ့ နိုင်ငံတရပ်မှာ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုနဲ့ နိုင်ငံရေးဂိုဏ်းဂနစိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေရှိနေပြီဆိုရင် နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေ မုချပေါ်ပေါက်လာတတ်တယ် ဆိုတာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ (Goldstone , J. Robert Bates , Ted Gurr & et. al. ( 2005 ) အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံတွင် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုလေ့လာရေးအဖွဲ့ ဖတ်ကြားတဲ့ ''A global forecasting model of political instability'' စာတမ်း) အစိုးရသစ်တရပ်ဟာမည့်သည့်အသွင်ကူးပြောင်းရေး ပုံစံကျင့်သုံးသည်ဖြစ်စေ လောလောဆယ် စီးပွားရေးနိမ့်ကျနေမှုမှ ချက်ချင်းနလံထူလာနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ လူနေမှုအဆင့်နိမ့်ကျနေမှုဟာ ၂၀၁၀ အပြီးကာလတွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါလိမ့်ဦးမည်။ စီးပွားရေးအခက်အခဲတွေဟာနိုင်ငံရေး မကျေနပ်မှု များသို့ ကူးစက်သွားတတ်တယ်၊ စီးပွားရေးနိမ့်ကျဆင်းရဲမှု ဆက်လက်တည်ရှိနေရင် အစိုးရအဖွဲ့ထဲ တပ်မတော်ဆက်လက်ပါဝင်နေမှုကို လူထုကအပြစ်မြင်လာနိုင်တယ်။
ရာနှုန်းပြည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ချက်ချင်းကူးပြောင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ နိုင်ငံများမှာတချိန် က ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံများအဖို့ လွတ်လပ်ခွင့်တစုံတရာပွင့်လင်းလာပါ တယ်။ စီးပွားရေးမှာမကျေနပ်ဖြစ်နေတဲ့ လူထုတွေဟာ နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေနောက်ကို ပါသွားတတ်ပါ တယ်။ သဘောထားတင်းမာတဲ့ အတိုက်အခံတွေဟာ အစိုးရသစ်အပေါ် ဖိအားပေးဖို့ရာ ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်ပြီးမကျေနပ်စိတ်တွေနဲ့ မွမ်းကြပ်နေတဲ့လူထုတွေကို လတ်တလောပွင့်လင်းလာတဲ့ နိုင်ငံရေးအခွင့် အလမ်းအသုံးပြုပြီး လှုံ့ဆော်လေ့ရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ဦးတည်ချက်ကတော့ တည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေပျက်ပြား စေရေးနဲ့ တပ်မတော်ကို နိုင်ငံရေးမှဖယ်ထုတ်ရေးတွေပါပဲ။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီးစီးချိန်တွင် မိမိလမ်းညွှန်စီမံခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ အကာအကွယ်ရှိနေသေး တဲ့တိုင်အောင် တပ်မတော်ဟာခံစစ်အနေအထားသို့ ရောက်ရှိနိုင်စရာရှိပါတယ်။ ပါလီမန်အတွင်းရှိ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ် ၂၅% ဟာအတိုက်အခံဆန့်ကျင်မှုတွေ အန္တရာယ်မှ တပ်မတော်ရဲ့အဓိကဦး တည်ချက်များဆက်လက်တည်တံ့ရေးကို ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ တပ်မတော်ဟာ သဘောထားတင်းမာသူများကို ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲဆန္ဒပေးခွင့်မရှိအောင် လုပ်သွားနိုင် သလို ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်းကာလမှာပင် သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို ကန့်သတ်သွားနိုင်စရာရှိပါတယ်။ အဆိုပါ အခြေအနေအလားအလာအရပ်ရပ်အရ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးကာလမှာလည်း တပ်မတော်နှင့် သဘောထားတင်းမာသူများအကြားထိပ်တိုက်တွေ့မှုဟာ ပိုမိုအရှိန်မြင့်လာစရာရှိပါတယ်။
၂၀၁၀ နောက်ပိုင်းတက်လာမဲ့အစိုးရသစ်အတွက် စိန်ခေါ်မှုနောက်တခုကတော့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားတဲ့အဖွဲ့စည်းများ ဖျက်သိမ်းရေးပါပဲ။ အနှစ် ၂၀ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ လက်နက်ကိုင်အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အဓိကအဖွဲ့အစည်း (၁၅) ခုနှင့်နိုင်ငံရေးသဘောတူညီမှုရသည်အထိခရီးမရောက်သေးပါ။ စုစု ပေါင်းလက်နက်ကိုင်အင်အား ၄၀ယ ၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိ တာလီဘန်အဖွဲ့ထက် ( ၄ ) ဆ ကြီးပါတယ်။ ၂၀၁၀ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ခြေလှမ်းတချက်မှားရင် တိုင်းပြည်တွင်းမှာ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခကြီးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ စစ်မက်ထူပြောလာတာနဲ့အမျှ မြန်မာနိုင်ငံရေးတွင်တပ်မတော်ရဲ့ အရေးပါမှုဟာလည်း မရှောင်လွှဲသာဆက်လက်တည်ရှိပါလိမ့်မယ်။
၂၀၁၀ နောက်ပိုင်းလက်တွေ့ကျတဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး
နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေ၊ ပျက်စီးကျေပြုန်းမဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့မှုတွေ၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှု တဖန်ပြန် ခေါင်းထောင်လာမှုတွေ စတဲ့အလားအလာတွေမှရှောင်ကွင်းဖို့ရာ တခုတည်းသော လမ်းကတော့ ၂၀၁၀ အပြီးကာလတွင် စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို လက်ခံကျင့်သုံးဖို့လိုပါတယ်။ အတိုက်အခံ များရဲ့ အတိတ်က အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဆောင်ရွက်မှုများမှာ အဓိကလိုအပ်ချက်များ မပါဝင် တဲ့အတွက် အထမမြောက်မအောင်မြင်ခဲ့တာပါ။
၂၀၁၀ အပြီး အသွင်ကူးပြောင်းရေးကြားကာလဟာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိုချက်ချင်း လက်ငင်းမွေးဖွားပေးမယ်တော့မဟုတ်ပါ ဒါပေမယ့် ပဋိပက္ခအတွင်းက အဓိကတာဝန်ရှိသူများအကြား အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်မယ့် ဘုံရပ်တည်ချက် နိုင်ငံရေးနယ်ပါယ်တရပ် ဖန်တီးလာနိုင် ပါလိမ့်မယ် အတိတ်တုန်းကတော့ ကာယကံရှင်နှစ်ဦးနှစ်ဘက်လုံးဟာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ် ရေးစကားလုံးကို တဘက်နှင့်တဘက် အသာစီးရရေးမှာသာ အသုံးချခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်တဲ့ ဘုံအကျိုးစီးပွါ်းနှင့် စပ်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဘုံရပ်တည်ချက် (Commonground) တွေ မရှာဖွေခဲ့ကြပါ။
(၂၂) နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက် ပါလီမန်အတွင်းတွင် အရပ်သားနိုင်ငံရေးသမားကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်များအတူ ယှဉ်တွဲဆောင်ရွက်ကြရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်အတွက် မူဝါဒရေးရာရှာဖွေ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ချမှတ်ရာ အစည်းအဝေးခန်းမဖြစ်လာပါလိမ့််မယ်။ ၂၀၁၀ အသွင်ကူး ပြောင်းရေးကာလဟာဖြင့် တိုင်းပြည်တွင်များစွာ လိုအပ်လျက်ရှိတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ရှာကြံရာမှာ အရှိန်အဟုန်နှင့်အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးအစပြုဖို့ အခွင့်အလမ်းတရပ် လည်း ပွင့်လင်းလာစရာရှိပါတယ်။
အစိုးရရဲ့အနာဂတ်လမ်းညွှန်မြေပုံကိုတော့ ရှောင်ရှားလို့ရနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါ အဲဒီလမ်းညွှန်ချက် ကိုစွန့်လွှတ်ပြီး အတိုက်အခံနဲ့စေစပ်လိမ့်မယ်လည်းမဟုတ်ပါ။ တပ်မတော်ဦးဆောင်မယ့် အသွင်ပြောင်း ရေးဖြစ်စဉ်မှတဆင့်သာ နိုင်ငံရေးခန်းဟာ ဖြစ်ပေါ်စရာရှိပါတယ် အတိတ်တုန်းက ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေး သမားတွေဘက်က မိမိတို့ခင်းကျင်းထားတဲ့စားပွဲမှာ တပ်မတော်ကို ထိုင်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ ယခုအချိန်မှာတော့ တပ်မတော်ရဲ့အခင်းအကျင်းအတိုင်း ဆန့်ကျင်သူ တွေက လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရတော့မယ့် အနေအထားကို ရောက်နေပါပြီ။
၂၀၁၀ ခုနှစ်အပြီး အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဟာ တပ်မတော်၊ ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ အတိုက်အခံများနဲ့လူမျိုးစုများအကြား သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပုံစံရယ်လို့ ချက်ချင်းလက်ငင်းပေါ် ထွက်လာဦးမည်မဟုတ်ပါ ပါလီမန်လွှတ်တော်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း တပ်မတော်နှင့်အပြုသဘောအမြင်ရှိ သူများရဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေနဲ့အစပြုစရာရှိပါတယ်။ နိုင်ငံရေးနယ်ပါယ်မှာပါဝင်နေပြီဖြစ်တဲ့ အပစ်အခတ်ရပ် အဖွဲ့များဟာ လူမျိုးစုပြသနာများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လာစရာရှိပါ တယ်။
၂၀၁၀ ပြီးကာလရဲ့ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများဟာ အဖျက်လုပ်ငန်းဆန့်ကျင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ နိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေးတွေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးအောင်မြင်ဖို့ရာ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ် (၂)ရပ် ဟာ အရေးပါလှပါတယ်။ လွတ်လပ်ပွင့် လင်းရေး(Liberalization) နဲ့ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေး (Democratization) ဖြစ်ပေါ်ဖို့တွင် အုပ်စုဂိုဏ်းဂဏစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဟာ ဆိုးကျိုးကိုသာဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာ ခါးသည်းနာကျည်းစရာအမှန်တရားကတော့ ၁၉၅၅ ခုနှစ်မှစလို့ ရေတွက်ရင် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှု (၁၀၈)ခုမှာ နိုင်ငံ(၁၂)နိုင်ငံသာ ဒီမိုကရေစီစခန်းသို့ တက်လှမ်းရောက်ရှိနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကိစ္စများစွာမှာ အသွင်ကူးပြောင်း ရေးနောက်တော်ပါးမှ နိုင်ငံမတည်မငြိမ်မှုတွေလိုက်ပါလာခဲ့ခြင်းပါပဲ။ အချို့နိုင်ငံများမှာတော့ အာဏာရှင် စနစ်အသွင်တမျိုးမျိုးပြန်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ အသွင်ကူးပြောင်းမှုပြုနေတဲ့နိုင်ငံများအတွင်း အုပ်စု ဂိုဏ်းဂဏတိုက်ပွဲ စိတ်ဝမ်းကွဲမှု တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။
အပြုသဘော ဆောင်သူများရဲ့ အရေးပါမှု
မြန်မာနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခမှာ ဂိုဏ်းဂဏစိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေလည်း များပြားလှပါတယ်။ တပ်မတော်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အုပ်စုတို့ကြားမှာလည်း နက်ရှိုင်းတဲ့ကွာဟမှုရှိနေပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အုပ်စုများက တော့ ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်းမှာလည်း တပ်မတော်နဲ့ထိပ်တိုက် ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားစရာရှိတယ်။ စီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုံခြုံရေးနဲ့လူထုဘ၀ဖူလုံရေးလို အကျိုးတူကိစ္စရပ်များမှာပင် အရပ်သားနိုင်ငံရေးသမားများနဲ့ တပ်မတော်တို့လက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်မှု မရှိသမျှကာလပတ်လုံး ယုံကြည် မှုတည်ဆောက်ရေးဟာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အလုံးစုံထိပ်တိုက်ဆန့်ကျင်ရေးအစား အကျိုးတူကိစ္စတွေမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရေးဟာအဓိက အလုပ်ပါ။
၂၀၁၀ နောက်ပိုင်းကာလမှာ လက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် အရပ်သားနိုင်ငံရေးသမားတွေ အလုံ အလောက် မရှိသေးဖူးလို့ တပ်မတော်အနေနဲ့ထင်မြင်နေသေးရင် လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အရပ်သား နိုင်ငံရေးသမားတွေပါဝင်မှုနဲ့ စည်းရုံးလှုပ်ရှားနိုင်မှုတွေကို ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ထားနိုင်စရာရှိပါတယ်။ တပ်မတော်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားလိုတဲ့ အရပ်သားအင်အားစုတရပ်ကတော့ NLD မဟုတ်တဲ့ အပြုသဘောအမြင်ရှိသူ ဒီမိုကရေစီသမားများဖြစ်တယ် ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ် လိုလားလက်ခံမှုမရှိကြပါ တပ်မတော်အနေနဲ့ အဆိုပါတတိယအင်အားစုအပေါ် အပြည့်အ၀ယုံကြည် စိတ်ချမှုမရှိ်နိုင်ပေမယ့် မိမိရဲလမ်းညွှန်မြေပုံအကောင်အထည်ဖော်ရေးမှာ လက်တွဲဆောင်ရွက်ရမယ့် တခု တည်းသော အရပ်သားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဖြစ်ပါတယ်။
အရပ်ဘက်နဲ့စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးတွင် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ကြရာမှာ တာထွက်ပဏာမ အဆင့်တွေဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာနယ်ပါယ်များတွင် တပ်မတော်နှင့် တတိယအင်အားစုတို့ အကြား တူညီတဲ့ ဘုံရပ်တည်ချက်တွေရှိနေကြတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခအတွင်းက ရန်-ငါ ဆက်ဆံရေး တွေကို လျော့ပါးစေခြင်းဖြင့် အစွန်းနှစ်ဘက်တို့အကြား လိုအပ်နေတဲ့ ကြားခံစခန်းထောက်အဖြစ် အဆို ပါ တတိယအင်အားစုဟာ ထမ်းရွက်နိုင်စရာရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက တတိယအင်အားစုဖြစ်လာနိုင်ဖို့ အလားအလာရှိသူများအကြား အဓိက လိုအပ်ချက်ဖြစ်နေတာကတော့ ထက်မြက်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ ညီညွတ်ပေါင်းစည်းမှု တို့ပါပဲ အပြုသဘော အမြင်ရှိသူများအကြားမှာ လက်ရှိအခြေအနေတွင် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း တရပ်အဖြစ်လက်တွေ့ကျကျဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရာ မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့ ခေါင်း ဆောင်မှုတွေစုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရေး နယ်ပါယ် တွင် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ သဘောထားရှိသူများ တစုတစည်းတည်း ဖြစ်ပေါ်လာရေး အတွက် မွေးမြူလေ့ကျင့်ပေးမယ့် ဘူမိနက်သန်နေရာမှန် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အပြောင်းအလဲတရပ်ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် တပ်မတော်ရဲ့လမ်းပြမြေပုံဟာ မရှောင်သာတဲ့လိုအပ် ချက်ဖြစ်နေသမျှကာလပတ်လုံး ၂၀၁၀နောက်ပိုင်း အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အရှိန် အဟုန်နှင့်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ကိစ္စတွင် လုပ်ရည်ကြံရည်နှင့်ပြည့်စုံတဲ့ တတိယအင်အားစု ပေါ်ပေါက်ရေး ဟာလည်း မဟာဗျုဟာမြောက် အရေးပါအရာရောက်မှုဖြစ်နေပါတော့တယ်။
ဦးမင်းဇော်ဦးဟာ တောင်အာရှနှင့်အရှေ့တောင်အာရှဆိုင်ရာ ဒေသလုံခြုံတည်ငြိမ်ရေးပြဿနာနှင့် ပတ်သက်ပြီး အထူးပြုလေ့လာသူဖြစ်တယ်။ သူဟာ ဂျော့မေဆင်တက္ကသိုလ်မှာ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူး ပြောင်းမှု (၁၀၈)ခုအပေါ် လေ့လာသုံးသပ်ချက်ပါရဂူဘွဲ့ဆိုင်ရာစာတန်း တင်သွင်းထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျော့တောင်းတက္ကသိုလ်တွင် လုံခြုံမှုဆိုင်ရာလေ့လာရေး မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ ဂျော့မေဆင်တက္ကသိုလ်တွင် ပဋိပက္ခဆန်းစစ်ဖြေရှင်းမှု မဟာသိပ္ပံဘွဲ့များ ရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီ (၂၂)
၁၉၅၅ ခုနှစ်မှအစပြုလို့ ဒီကနေ့အထိ နိုင်ငံပေါင်း(၁၀၈)နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး ဖြစ်ရပ်များကို သုံးသပ်လေ့လာထားတဲ့ ပါရဂူဘွဲ့စာတန်း ဂျော့မေဆင်တက္ကသိုလ်မှာ တင်သွင်းထားသူ ဦးမင်းဇော်ဦးက ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာ ခါးသည်းနာကျည်းစရာ အမှန်တရားက တော့ ၁၉၅၅ ခုနှစ်မှစလို့ရေတွက်ရင် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှု(၁၀၈)ခုမှာ နိုင်ငံ(၁၂)နိုင်ငံ သာ ဒီမိုကရေစီ စခန်းသို့ အောင်မြင်စွာတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ သမိုင်းလမ်းကြောင်းများကို ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများမှတဆင့် ဆည်းပူး သင်အံအဖြေရှာရတဲ့ ပြည်တွင်းက တို့များအဖို့တော့ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်ကာလများဆီကပင် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာ စက်မှုနှင့်ကုန်သွယ်အရင်းရှင်တို့က အုပ်စိုးသူပဒေသရာဇ်လူတန်းစားအပေါ် ဆန့် ကျင်ဦးဆောင်ဆင်နွှဲတဲ့ တော်လှန်ရေး (Revolution From Below) အမျိုးအစားသာမက နိုင်ငံခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အုပ်စိုးသူ လူတန်းစားများ အထဲက လမ်းခွဲထွက်ပြီးဦးဆောင်ဆင်နွှဲတဲ့တော်လှန်ရေးမျိုး (Revolution From Above) ရှိကြောင်း ဂျာမနီ၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ တိုင်ဝမ်တို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံ များအရ တွေ့ရှိသိမြင်ခဲ့ပါတယ်။
ဦးမင်းဇော်ဦးက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားသူ အရပ်သားများ ပါလီမန်မှာ တပ်မတော်နှင့်လက်တွဲသွားဖို့အရေးဟာ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး အတွက် အခြေခံ လိုအပ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြထားပါတယ်။
တို့များဟာလည်း အုပ်စိုးသူလူတန်းစားများထဲက အစိတ်အပိုင်းတရပ် လမ်းခွဲထွက်ပြီး ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးဆင်နွှဲတဲ့ ရာဇ၀င်လမ်းကြောင်းကို သိမြင် သဘောပေါက်ထားတာရယ် တဘက်မှာလည်း နိုင်ငံရေးအရငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်ပြီး စီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုအရှိန်မပျက်ဖြစ်ပေါ်မှသာ လူထုတွေ ဟာ ဒီမိုကရေစီထုံးစဉ်လာတွေ အလေ့အကျင့်ရ ကျင့်သုံးဆောက်တည်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မက္ခ၀ါဒ နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒရဲ့ အလင်းရောင်ပေးမှုရယ်တို့ကြောင့် ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်အာဏာရယူပြီး ပါတီစုံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးနဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးကို ကျင့်သုံးမယ်လို့ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်စုများက ကြေငြာလိုက်တဲ့အချိန်မှအစပြုလို့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကျော်ကာလအတွင်းမှာ အပြုသဘောဆောင် တဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေပေါ်ပေါက်ရေးကို သဘောတရားအရရော လက်တွေ့အရပါ ကိုယ်တိုင်ပါဝင် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်မှုတွေ အဆက်မပြတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
လာမဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလမှာလည်း အမျိုးသားနိုင်ငံရေးလိုလားတဲ့ အဖွဲ့(၈)ဖွဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ ကြိုး ပမ်းသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကြိုးပမ်းမှုအစဉ်မှာ ပူးတွဲပါ ဦးမင်းဇော်ဦးရဲ့စာတန်းဟာဖြင့် အမတရွှေဂူ ဒီမိုကရေစီပြည်နိဗ္ဗန်သို့ သယ်ယူဆောင်ပို့မယ့် ဖောင်ကူးတို့ကြီးတစင်းသဖွယ်ဖြစ်ပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။
အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးသမားများ ပေါ်ထွန်းရေးသို့
UN special envoy Gambari arrives in Myanmar
Channelnewsasia 31 January 2009
YANGON: UN special envoy Ibrahim Gambari arrived in Myanmar Saturday for fresh talks with the government, officials said, less than six months after his last trip ended in deadlock.
As with previous visits, Myanmar's military rulers have kept the UN diplomat in the dark over his itinerary in the country, saying only he would spend the entire trip in Yangon and meet with the information minister.
Myanmar’s government has shown no sign of willingness to embrace Gambari's mediation, failing to invite him to their remote capital in Naypyidaw during his last two missions here in August and March 2008.
However Nyan Win, spokesman for the opposition National League of Democracy (NLD), said Gambari was expected to meet with detained democracy leader Aung San Suu Kyi during his latest trip.
Aung San Suu Kyi surprised observers by refusing to meet with the Nigerian diplomat during his mission to Myanmar last August,amove interpreted asasnub after he had failed to secure any political reform in Myanmar.
The democracy leader has spent most of the last 19 years under house arrest at her lakeside house in Yangon, seeing only her personal doctor and sometimes her lawyer.
Gambari landed in the main city of Yangon at 9:35am (0305 GMT), UN and airport officials said. He left Yangon airport shortly after landing and was driven to his hotel in the city.
UN chief Ban Ki-moon asked Gambari "to continue his consultations with the government and other relevant parties," UN deputy spokeswoman Marie Okabe said inastatement Friday confirming the trip.
Diplomats said the late confirmation from the United Nations was because Gambari's last visits had been deemed unsuccessful in negotiating any political reforms.
There was no indication of whether the issue of Myanmar's Rohingya ethnic minority would be on the agenda.
Human rights group Amnesty International called on Myanmar Friday to stop persecuting its Rohingya people, hundreds of whom were found adrift in open waters after attempting to seek refuge in Thailand.
Myanmar has been ruled by the military since 1962. The NLD wonalandslide victory in 1990 elections, but the military government has never allowed them to take office.
The Myanmar government, which adoptedanew constitution in 2008, says it intends to organise elections in 2010.
But the US, the EU and the United Nations have dismissed the lengthy proceedings asasham because of the absence of the NLD party.
(ရခိုင်ပြည်သူများကို ပျားရည်နှင့် ၀မ်းချရန်ကြိုးပမ်းမူ အဖြစ် အများက ထင်မြင်ယူဆ)
ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့တော်စစ်တွေနှင့် အမ်းမြို့ အကြား ရထားလမ်း တခုကို များအကြာမှီ စတင် ဖေါက်လုပ်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း နအဖ စစ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများက တရားဝင် ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ရထားလမ်း အစီအစဉ်ကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက်နေ့က စစ်တွေမြို့ မြို့တော်ခန်းမတွင် ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးတွင် နအဖ ၀န်ကြီးချုပ် သိန်းစိန်က တရားဝင် ထုတ်ဖေါ် ပြောကြား လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ နအဖ အစိုးရ အရာရှိများအပြင် စစ်တွေမြို့မိ မြို့ဖများလည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ယခင်က အိပ်မက်ပင် မမက်ခဲ့ဖူးသော ရန်ကုန် စစ်တွေ ကားလမ်းမကြီးကို နအဖ စစ်အစိုးရ လက်ထက်တွင် ဖေါက်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အဘက်ဘက်မှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့သည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်သိန်းစိန်က ပြောကြားပြီး များမကြာမှီ ရထားလမ်း တခုကိုလည်း ဖေါက်လုပ်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ရထားလမ်းမှာ ၄ နှစ်စီမံကိန်း ဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်သူများ မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ကြရတော့မည် ဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
၄င်းပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပထ၀ီအနေအထားနှင့် ကိုလိုနီ တို့၏ သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မူကြောင့် တိ်ုင်းရင်းသား အချင်းချင်း ယုံမှား သံသယ ဖြစ်ကာ လူမျိုးစွဲ ဒေသစွဲ ဖြစ်ပြီး တည်ငြိမ်အေးချမ်းမူ မရှိ၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မူ နောက်ကျခဲ့ရပြီး တပ်မတော် အစိုးရလက်ထက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အလေးပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ပြောကြားသည်။
သို့သော်လက်တွေ့ဘ၀တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ နအဖ စစ်အာဏာပိုင်များ ပြောကြားသကဲ့သို့ တပ်မတော် အစိုးရလက်ထက်၌ တစုံတရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းမရှိဘဲ ပို၍ပင် နအဖ စစ်အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်မူကို ခံလာခဲ့ရသည်ဟု အမည်မဖေါ်လိုသူ စစ်တွေမှ ရခိုင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေး သမားတဦးက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင်လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဆင်းရဲ အနိမ့်ကျဆုံး ပြည်နယ် တခုဖြစ်နေပြီး ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်နေခြင်းမှာ ရခိုင်အမျိုးသားများ၏ ဒေသစွဲ လူမျိုးစွဲ ပြင်းထန်၍ မဟုတ်ဘဲ နအဖ စစ်အစိုးရ အပါအ၀င် အုပ်ချုပ်သူ ဗမာအမျိုးသားများက လူမျိုးရေး မုန်းတီ်းမူအရ ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့ထက် ဆိုးရွားသော ပေါ်လစီများကို ကျင့်သုံးကာ ရခိုင်အမျိုးသားများကို သွေးခွဲ ဖိနှိပ် အုပ်ချုပ်နေ၍ ဖြစ်သည်ဟု သူက ပြောကြားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နအဖ စစ်အစိုးရ၏ နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်း စက်ရုံ အလုပ်ရုံ တခုမှ တည်ဆောက်ပေးခြင်း မရှိသလို စစ်တပ် တပ်ရင်း ၆၀ နီးပါးခန်ကိုသာ တိုးချဲ့ အခြေချထားပြီး ရခိုင် တောင်သူ လယ်သမားများ ပိုင်ဆိုင်သော လယ်ယာများကို သိမ်းယူနေသဖြင့် နအဖ စစ်အစိုးရအပေါ် ရခိုင်ပြည်သူများက အထူးနာကျည်းလျက် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
၄င်းအပြင် ယခုပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး ဖြစ်နေသူ ယင်းအချိန်က တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် မောင်ဦးသည် လူမျိုးရေး အမြင်အရ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ရစရာ မရှိအောင် ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သဖြင့် ယခုအချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် စီးပွားရေးမှာ အဖတ်ဆယ်မရအောင် ပျက်စီး ယိုယွင်း နေသည်ဟု သိရသည်။
ထိုကဲ့သို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို လူမျိုးရေး အစွဲဖြင့် ဖျက်ဆီး ပစ်ခဲ့သော တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် မောင်ဦးကို နအဖ အထက် ခေါင်းဆောင်များက အရေး တစုံတရာ မယူသည့် အပြင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး အဖြစ် ရာထူးတိုးကာ မြှောက်စားခဲ့သဖြင့် နအဖ စစ်အစိုးရ၏ လုပ်ရပ် အပေါ် ရခိုင်လူထုက အထူးမကျေမနပ် ဖြစ်ခဲ့သည်။
သို့အတွက်လည်း ရခိုင်အမျိုးသားများ အနေဖြင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အပြင်းထန်ဆုံးသော နအဖ စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်ရပ်များကို ပြုလုပ်ကာ နအဖ စစ်အစိုးရကို အာခံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု လေ့လာ သုံးသပ် သူများက ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ရခိုင်အမျိုးသားများ အနေဖြင့် နအဖ စစ်အစိုးရ အပေါ် နာကျည်းနေမူများ ရှိနေသည်ကို သိရှိနေသော နအဖ စစ်အစိုးရသည် ရခိုင်လူထုကို ပျားရည်နှင့် ၀မ်းချဆိုသလို ရထားလမ်းနှင့် ရေအားလျှပ်စစ်များကို ပြကာ ပြန်လည် စည်းရုံး သိမ်းသွင်းရန် ကြိုးပမ်းလာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံရေး ကျွမ်းကျင်သူများက စစ်တွေတွင် ပြောဆိုနေကြသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
DKBA တပ်ရင်း (999) လုံခြုံရေးဖြင့် လူလတ်ပိုင်းနှစ်ဦး လောင်းကစားဝိုင်း ဖွင့်နေ
DKBA မှ လုံခြုံရေးတာဝန်ယူပြီး သံဖြူဇရပ်မြို့နှင့် ကျုံကြုပ်ကျေးရွာကြားရှိ ရာဘာခြံတွင် ကစားဝိုင်းများ ဖွင့်နေသည်ဟု ကျုံကြုပ်ရွာသားတစ်ဦးထံမှသိရသည်။
DKBA တပ်ရင်း (999) အသင်းမှ လုံခြုံရေးတာဝန်ယူပေးပြီး သံဖြူဇရပ်မြို့ ကြံ့ခိုင်ရေး ရပ်ကွက် နေ ဦးဟုတ်ရှိန် ၊ မောင်အကျုပ် နှင့် DKBA (999) အဖွဲ့ဝင်များ ကြက်ဝိုင်း၊ ဖဲဝိုင်း၊ အနီထောင် ဝိုင်းများကို ဦးဆောင်ပြီး သံဖြူဇရပ်မြို့နှင့် ကျုံကြုပ်ကျေးရွာကြားရှိ ရာဘာခြံတစ်ခြံတွင် ကစား ဝိုင်းများဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်စားနေကြောင်း အနီးနားမှ ရွာသားတစ်ဦးက ဆိုသည်။
“အနီထောင်ဝိုင်းက မနက် ၁၀ နာရီကနေ ညနေ ၄း၃၀ အထိရှိတယ်၊ အနီထောင် တစ်ဝိုင်းက တစ်နေ့ ၂၅၀၀၀ ကျပ် အခွန်ဆောင်ရပြီး ငွေတစ်သိန်းဆိုရင် အကောက်ခွန်အတွက် တစ် သောင်းကျပ်ကို DKBA အဖွဲ့ကိုပေးရတယ် ’’ ဟု လောင်းကစားသမားတစ်ဦးက ပြောသည်။
အနီထောင်ကစားသော လူအများစုမှာ လူကြီးပိုင်း ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း လောက်ရှိပြီး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း လောက်မှာ လူငယ်များဖြစ်ပြီး ကစားသောလူများဖြင့် နေ့တိုင်းပြည့်နှက်နေသည်ဟု ၄င်းရွာသားက ဆက်ပြောသည်။
“ကြက်ဝိုင်းက ညနေ့စောင်း (၁) နာ၇ီကနေ ညနေ ၄ နာရီခွဲအထိ ရှိတယ၊် တချို့နေ့တွေဆိုရင် ကြက်ဝိုင်းက (၃) ဝိုင်း ( ၄ ) ၀ိုင်းအထိရှိတတ်ပြီး နည်းတဲ့နေ့တွေဆိုရင် (၁) ၀ိုင်းလောက်က တော့ နေ့တိုင်းရှိတယ်’’ ဟု ကြက်ဝိုင်းကစားသမားတစ်ဦးက ပြောသည်။
DKBA အဖွဲ့မှ ၄င်းကစားဝိုင်းအတွက် ခွင့်ပြုချက်ကို နေပြည်တော်ကနေ တိုက်ရိုက်ရရှိထားခြင်း အကောက်အခွန်အတွက် သံဖြုဇရပ်မြို့နယ်မှ ရဲစခန်းမှူးကို တစ်လဆိုရင် ငါးသောင်းကျပ် ပေးထားခြင်းကြောင့် သံဖြူဇရပ်မြို့မှ နယ်ထိန်း နှင့်ရဲများ လာရောက်စစ်ဆေးခြင်း အလွန်နည်းသည့်အတွက် ကစားဝိုင်းတွင် လောင်းကစားသမားများဖြင့် ပြည့်နေသည်ဟု DKBA တပ်ရင်း ၉၉၉ နှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
“ ကရင်နှစ်သစ်ကူးရန်ပုံငွေအတွက် ဒီကစားဝိုင်းတွေကို ဖွင့်တယ်၊ ဒီနှစ် မိုးကျချိန်ထိ ဖွင့်သွား မယ်” ဟု လည်းကောင်း DKBA (999) နီးစပ်သူတစ်ဦးကလည်း “ တစ်နေ့ ကောက်ခံရရှိငွေ မှာ သုံးသိန်း လေးသိန်း အထိ ၀င်နေတယ်’’ ဟုဆက်ပြောသည်။
ကစားဝိုင်းများလာခြင်းကြောင့် ရွာအတွင်းရှိ သူခိုးများပေါလာခြင်း၊ ဆိုင်ကယ်လုခြင်း၊ အနီး အနားရှိကျေးရွာများမှ လူငယ်များပျက်စီးလာခြင်းစသည့် ဆိုးကျိုးများ များပြားလာ သော်လည်း ကစားဝိုင်းတွင် DKBA တပ်ရင်း (999) စစ်သားများ လုံခြုံရေးယူထားခြင်းကြောင့် ရန်ပွဲများဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဟု ရွာသားတစ်ဦးကဆိုသည်။
“ဆိုင်ကယ်ပေါင်ဖို့အတွက် အဲဒီကစားဝိုင်အနီးအနားမှာ ပွဲစားတွေအဆင်သင့်စောင့်နေတယ်၊ (၁၀) သိန်းတန်ဆိုရင် (၆) သိန်းပဲရတယ်၊ တကယ်လို့ တစ်လပြည့်လို့သွားမရွေးဘူးဆိုရင် အဲဒီဆိုင်ကယ်အဆုံးခံရမယ်” ဟု သံဖြူဇရပ်မြို့ အောင်ကုသိုလ်ရပ်ကွက်မှ လူငယ်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
ဒါ့အပြင် ကြာကန်ဘောလုံးကွင်းတွင်လည်း တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ရပ်ကွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေ အတွက် ပွဲသွင်းရာတွင်လည်း ကစားဝိုင်းများဖွင့်ပြီး မယက၊ ရယက တို့မှ အကောက်အခွန် များကို ကောက်ခံလေ့ရှိသည်ဟု အောင်သုခရပ်ကွက်မှ လူငယ်တစ်ဦးကဆိုသည်။
၄င်းတို့တွင်သာမက အောင်ဇေယျ ကျောက်မောင်းရပ်ကွက်တွင်းရှိ လမ်းများတွင်လည်း ရပ်ကွက်ဖွံဖြိုးရေးအတွက် ကစားဝိုင်းများကို ရယက ဦးဆောင်ပြီး သုံးနေ့သုံးည ဆက်တိုက် ဖွင့်လေ့ရှိသည်ဟု ထိုလူငယ်က ဆက်ပြောသည်။
နာဂစ်ထိ ရန်ကုန်ကျောင်းများ ကျပ်သန်း ၃ ထောင်ကျော်ကုန်မည်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးသွားသည့် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှ စာသင်ကျောင်း ၇၇ ကျောင်းကို ပြန်ဆောက်ရန် ကျပ်ငွေ သန်းပေါင်း ၃၂၇၀ ခန့် ကုန်ကျမည်ဟု အာဏာပိုင်များက ခန့်မှန်းထားသည်။
ယခုလ ၂၁ ရက်နေ့က ပြည်တွင်းသတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည့် ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်သိန်းလင်းက အမေရိကန် ဒေါ်လာအားဖြင့် ၃၁ သန်းကျော် ကုန်ကျနိုင်ကြောင်း ပြောကြားချက်ကို ကိုးကားကာ The Voice ဂျာနယ်က ရေးသားဖော်ပြသည်။
သမိုင်းတွင်လောက်ပင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ကြီးမားသည့် နာဂစ်မုန်တိုင်း ဘေးဒဏ်ကြောင့် လူဦးရေ ၄ သန်းရှိသည့် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှ မြို့နယ် ၃၃ မြို့နယ်နှင့် တွံတေး၊ ကွမ်းခြံကုန်း၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုတို့မှ နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင် ၄ ခုနှင့် တထပ်ကျောင်း ၇၃ ခုတို့ကို အရေးပေါ် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်နေသည်။
ကျောင်းပေါင်း ၄၇ ကျောင်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိနေသေးသော ကျောင်းများကိုမူ ယခုနှစ် စာသင်နှစ်အမီ ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဂျာနယ်က ရေးသားထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြေခံပညာကျောင်းများ၏ စာသင်နှစ်မှာ ပုံမှန်အားဖြင့် ဇွန်လတွင် စတင်လေ့ရှိသည်။
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ Jan,31st,2009
( 34 )Rohingya are indigenous to Burma
( 33 )ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာပြည် တိုင်းရင်းသားစာရင်းမ၀င်ဟု စစ်အစိုးရ သတင်းထုတ်ပြန်
( 32 )ရန်ကုန်၌ ဆေးစောင့်နေသည့် HIV/ AIDS လူနာများကို အာဏပိုင်များ နှင်ထုတ်
( 31 )Myanmar announces first foot-and-mouth-disease-free zone
( 30 )Myanmar boatpeople say death awaits them back home
( 29 )Leading saffron monk's memoir
( 28 )တရုတ်နှစ်ကူးပွဲတော် အတွင်း လောင်းကစားဝိုင်းများ တစ်စခန်းထ
( 27 )ကျေးရွာ မူလတန်းလွန်ကျောင်း ဖျက်ခံရ
( 26 )ဂမ်ဘာရီ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထပ်မံရောက်ရှိလာ
( 25 )UN envoy expected to meet Aung San Suu Kyi
( 24 )ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံကို သတိထားစောင့်ကြည့်ရန် တိုင်းမှူးပြော
( 23 )ဂမ်ဘာရီ မြန်မာပြည်သို့ ယနေ့ရောက်ရှိမည်
( 22 )UN envoy arrives in Burma for talks with the ruling junta
( 21 )အင်းစိန် ပိန္နကုန်း၌ မီးလောင်
( 20 )ကားမှောက်၍ ဒဏ်ရာရသည့် ကျောင်းသားများ ဆေးရုံမှ မဆင်းရသေး
( 19 )ရန်ကုန်တွင် ၃ ရက်ဆက်တိုက် မြူနှင်းထူထပ်နေ
( 18 )UN special envoy re-visits Myanmar on reconciliation efforts
( 17 )မစ္စတာဂမ်ဘာရီ မြန်မာပြည် လေးရက်ကြာခရီး စတင်
( 16 )Myanmar under fire over prison riots
( 15 )Burma must respect Rohingya minority
( 14 )လှေစီးပြေးရိုဟင်ဂျာများ အင်ဒိုနီးရှားကပြန်ပို့မည်
( 13 )Myanmar icebox men seek to stay in Australia
( 12 )UN Envoy To Begin Four-Day Visit To Myanmar
( 11 )The Mekong
( 10 )မြဝတီမှ ထိုင်းပစ္စည်းတင်ကားများ အတ္ထရံတံထားတွင် အဖမ်းခံရ
(9)စီးပွားကူးသန်းအားလုံး ဆက်လက်အေးနေဆဲ
( 8 )စာအုပ်အရောင်းမြှင့်ပွဲများ၌ စာရေးဆရာများ ပိုမို ရှေ့တန်းထွက်လာ
(7)UN envoy due in Burma to broker talks
(6)နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအား လွှတ်ရေး တောင်းဆိုချက်ကို ထောက်ခံရန် ပြည်သူများကို အဖွဲ့ချုပ်က တိုက်တွန်း
(5)Hard Labor
(4)ကိုယ်ဝန်ပျက် ရသည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသူအတွက် အယူခံ တိုင်းတရားရုံးက လက်ခံ
(3)UN special envoy to visit Myanmar
(2)Indonesian govt decides to deport ‘abused’ refugees
( 1 )ထိုင်းရောက် လှေစီး ရိုဟင်ဂျာတွေထဲ မြန်မာ နိုင်ငံကလာသူတွေပါဝင်
(၇) ကြိမ်မြောက်မွန်ပြည်သစ်ပါတီညီလာခံမှ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ကြိုဆိုထောက်ခံခြင်း
မွန်အမျိုးသားကောင်စီ ဇန်နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၀၉။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ သတ္တမအကြိမ်မြောက် ပါတီညီ လာခံကို ဇန်နာဝါရီလ(၁)ရက်နေ့မှ(၁၇)ရက်နေ့ထိ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီအဖွဲ့ဝင် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လေ့လာသူစုစုပေါင်း(၁၂၀)ဦး ကျော်တက်ရောက်ခဲ့သည့် ထိုညီလာခံမှ တညီတညွတ်တည်းချမှတ်ခဲ့သောအောက်ပါသဘောထားရပ်တည်ချက်ကို မွန်အမျိုးသားကောင်စီမှ လှုိက်လှဲစွာကြိုဆို ထောက်ခံသည်။
၂၀၀၈-ခုနှစ်အတွင်း အတည်ပြုခဲ့သော နိုင်ငံတောာ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် ပက်သက်၍ ပြန်လည် သုံးသပ်သင့်ပြီး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုမပါဘဲ၊ ဤအတိုင်းရှေ့ဆက်သွားမည်ဆိုပါက(၂၀၁၀)ရွေးကောက်ပွဲကို လက်ခံစဉ်းစားရန် အခက် အခဲရှိနေမှုကိုလည်း ဆုံးဖြတ်ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီသည် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးပါတီဖြစ်သည်။ ပါတီ၏ မဟာဗျူဟာသည် အချုပ်အချာ အာဏာနှင့် ပြည့်စုံသော မွန်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတော်ကို တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ထိုမဟာဗျူဟာ ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရေး အတွက် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး မဟာဗျူဟာနည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးခဲ့သော ပါတီတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
အရင်းရှင်ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း၊ အာဏာခွဲဝေရယူခြင်း၊ အရင်းရှင်ပါလီမန်မှ ရွေးကောက်တင် မြှောက်သော အစိုးရအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ခြင်းတို့သည် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ မဟာဗျူဟာ ရည်မှန်းချက်နှင့် မဟာဗျူဟာနည်း လမ်းတို့နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ပြဒါးတလမ်း သံတလမ်းဖြစ်နေပါသည်။
ရန်သူစစ်အာဏာရှင်နှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရေးဟူသည် ပါတီ၏ မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်ကို အလျှော့ပေးစေ့စပ်ဆွေး နွေးခြင်းမျိုး လုံးဝမဟုတ်ကြောင်း မွန်အမျိုးသားကောင်စီမှ သက်ဝင်ယုံကြည်သည် ရန်သူစစ်အာဏာရှင်နှင့် နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးသည်။
မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရေးအတွက် ယာယီခေတ္တကျင့်သုံးနည်းပရိယာယ်သာဖြစ်ထိုက်သည်၊ အစဉ်ထာဝရ ကျင့်သုံးသော လမ်းစဉ်တရပ်အဖြစ် မဖြစ်ထိုက်ဟု မွန်အမျိုးသားကောင်စီမှရှုမြင်သည်။ စေ့စပ်ပြီးပါတီ၏ မဟာဗျူဟာ ကို အလျှော့အတင်းပြုခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်း၊ လက်ဖြန့်ခံအာဏာ ခွဲဝေယူခြင်းသည်ပါတီ၏ မဟာဗျူဟာလမ်းစဉ်မှ သွေဖီသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သတိမူစေလိုသည်။
မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့၏ မဟာဗျူဟာလမ်းစဉ်မူဝါဒသည် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲအသွင်ဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်း ခွင့်ရှိ မွန်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးဖြစ်သည်။ ပါတီ၏ မဟာဗျူဟာအောင်မြင်ရေးအတွက် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်း ဖြစ်သော ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်း၊ အာဏာခွဲဝေယူခြင်း၊ စေစပ့်ညှိနှိုင်း၍ အဖြေရှာခြင်းစသည်တို့သည် မွန်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့၏ ပါတီလုပ်ငန်းစဉ် မဟာနည်းဗျူဟာဖြစ်သည်။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ မဟာနည်းဗျူဟာနှင့် မွန်အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့၏ မဟာနည်းဗျူဟာတို့သည် တခုနှင့်တခု မတူညီကြောင်းကို လေ့လာ သုံးသပ်လိုက်ရပါသည်
မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်နှင့်မဟာနည်းဗျူဟာတို့သည် ပါတီတရပ်၏ အသက်သွေးကြောဖြစ်သည်။
Monland Restoration Council (MRC)
5824 Decatur Rd.
Tel/fax: + 1 509-338-4982, Tel: + 1 260-447-7741
E-mail: honsawatoi@aol.com, mrc@mrc-usa.org
လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းမှ လူစုလူဝေးနည်း ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ထောက်ခံကြ (ဦးဝင်းတင်)
ဗမာစစ်အစိုးရ လေကြောင်းကာကွယ်ရေးအတွက် လက်နက်သစ် ၀ယ်ယူ အသုံးပြုနေ
ဗမာစစ်အစိုးရသည် ရုရှားနိုင်ငံထုတ် အိုင်ဂျီအယ်လ်အေ ခေါ် လေယာဉ်ပစ်အမြောက်စနစ်(လူအားဖြင့် သယ်ယူ ပို့ဆောင် နိုင်သောလက်နက်) တရပ်ကို နေပြည်တော်တွင် သင်တန်းပေးလေ့ကျင့်နေကြောင်း ၀ါရင့်နယ်ခြားစောင့်ကြည့်သူများက ပြောသည်။
ထိုသင်တန်းကို ကြီးကြပ်လေ့ကျင့်ပေးသူမှာ လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဌာနချုပ်မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်လှိုင် ယခင် လားရှိုးအခြေစိုက် အရှေ့မြောက်ပိုင်း ဒေသကွပ်ကဲရေးဌာနချုပ်၏ တိုင်းမှူးဟောင်းကြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ဒီဥစ္စာက နောက်ဆုံးပေါ်စနစ်အသစ်လား စနစ်အဟောင်းလားဆိုတာ ကျနော်တို့ စုံစမ်းထောက်လှမ်းနေပါတယ်” ဟု အသက် ၅၈ နှစ်အရွယ်အရာရှိတဦးကပြောသည်။
၎င်းအိုင်ဂျီအယ်လ်အေလက်နက်ကို ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် စတင်တီထွင်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် စတင်အသုံးပြုလာခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် စနစ်ဖြစ်သည့် အိုင်ဂျီအယ်လ်အေ-အက်စ် သည် ယူအက်စ် (US) ထုတ် လူဖြင့်သယ်ယူပြောင်းရွှေ့ နိုင်သော စတင်းဂျား စနစ်ထက် ပိုမို ယုံကြည်စိတ်ချရကြောင်း ၀ီကီပီးဒီးယား (wikipedia) မှလေ့လာသိရှိရသည်။ ထိုစနစ်ကိုဝယ်ယူ အသုံးပြု သည့်နိုင်ငံများထဲတွင် အိန္ဒိယ၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူ၊ တောင်ကိုးရီးယား နှင့်ဗီယက်နမ် စသည့်နိုင်ငံများ လည်းပါဝင်သည်။
ဇယားကွက်မီတာများမှတဆင့် ရန်သူတပ်များ၏ တည်ရှိရာနေရာများကို အလွန်တိကျမှန်ကန်စွာ ဖေါ်ထုတ်နိုင်စွမ်း ရှိသော ယူတီအမ်မ် UTM ခေါ် မြေပုံအညွန်းပြ စနစ်တရပ်ကိုလည်း နအဖက စတင်သုံးစွဲနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ရှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်းစဉ်မှ ဖေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ဒီချုပ်အတွင်း နှစ်ခြမ်းကွဲနိုင်ဟု စစ်အစိုးရပြော
ဆလိုင်းပီပီ သောကြာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ 30 2009
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် နှစ်ခြမ်းကွဲထွက်ဖွယ်ရှိပြီး အုပ်စုတစုသည် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လိမ့်မည်ဟူ၍ နအဖ တပ်မှူးများ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတရပ်က ဆိုသည်။
ဒီချုပ်အတွင်း အကွဲအပြဲ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဂိုဏ်းကွဲတခုသည် နောက်ထပ် နိုင်ငံရေးပါတီတရပ်အဖြစ် အမည်ပြောင်း၍ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု မြောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းက အစည်းအဝေးတရပ်တွင် တက်ရောက်လာသော စစ်တပ်အရာရှိကြီးများကို ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းက စစ်အစိုးရ၏ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့သွားရာ လမ်းပြမြေပုံနှင့် စပ်လျဉ်း၍မူ ရှေ့သို့ဤလမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အကောင်းပြောသွားသည်။
သို့သော်လည်း ဒီချုပ်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းကမူ ဒီချုပ်ကွဲမည်ဆိုသည့် သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိကြောင်း ငြင်းဆိုသလို၊ စစ်အစိုးရက သူ့စိတ်ထဲဖြစ်ချင်သည်များကို ပြောနေခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုလိုက်သည်။
"သူတို့က ဒီချုပ်ကို ကွဲစေချင်နေတာ" ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပြီး၊ ဒီချုပ်ကွဲမည်ဆိုသည့်သတင်းမှာ လုံးဝဖြစ်နိုင်ခြေ မရှိကြောင်းဖြင့်လည်း ငြင်းဆိုသည်။
ထို့ပြင် ဒီချုပ်အနေဖြင့် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စကို သူတို့၏ အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များတွင် ထည့်သွင်း၍ပင် မထားကြောင်းနှင့် စဉ်းစားရန်လည်း မလိုသေးကြောင်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဆက်ပြောသည်။
"ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ ထည့်သွင်းဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်လို့ ကျနော်တို့ မမြင်ပါဘူး" ဟု သူက ထပ်ပြောသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဖွဲ့ချုပ်၏ ရပ်တည်ချက်ကို ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ပြည်လုံးကျွတ် အစည်းအဝေးတရပ် ခေါ်ယူပေးရန် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်များထံ မကွေးတိုင်း ဒီချုပ်အဖွဲ့ဝင်များက ယခုလ ၂ ရက်နေ့တွင် စာတစောင်ပေးပို့၍ တောင်းဆိုထားသည်ဟု ရေနံချောင်းမြို့နယ် ဒီချုပ် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စောဌေးက ပြောသည်။
"တပြည်လုံးက အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေ တက်ရောက်နိုင်တဲ့ အစည်းအဝေးတရပ် ခေါ်ယူပေးဖို့၊ အဲဒီအစည်းအဝေးမှာ ၂ဝ၁ဝ ကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားကြမလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးဖို့ ကျမတို့ ပါတီဗဟိုကို စာရေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်" ဟု ဒေါ်ခင်စောဌေးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ပါတီဝင်များအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဖွဲ့ချုပ်၏ ရပ်တည်ချက်သဘောထားကို ရှင်းလင်းစွာ သိလိုသည်ဟုလည်း သူမက ပြောသည်။
ပါတီခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသော ဦးတင်ဦးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အကျဉ်းချခံနေရစဉ်တွင် ယခင်ကလည်း အဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက် သဘောထားကို ရုတ်တရက် ပြောင်းပစ်ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းရှိခဲ့ဖူးကြောင်း ဒေါ်ခင်စောဌေးက ပြောသည်။
"အရင်တုန်းကလည်း ဒီလိုပဲ။ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲကို မဝင်ဘူးပြောတယ်၊ နောက်တော့ ဝင်ပြိုင်တယ်။ နောက်တခါ အမျိုးသားညီလာခံကို မတက်ဘူးပြောတယ်၊ နောက်တော့ သွားတက်တယ်" ဟု သူက ပြောသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဤသို့ ပြည်လုံးကျွတ်အစည်းအဝေးတရပ် ခေါ်ယူပေးရန် တောင်းဆိုခြင်းသည် ပါတီတွင်း အကွဲအပြဲ ဖြစ်နေသည့် သဘောမဟုတ်ကြောင်းနှင့် ပါတီဝင်များသည် တခုတည်းသော မူဝါဒပေါ်တွင်သာ စွဲမြဲစွာ ရပ်တည်လုပ်ကိုင်နေကြကြောင်း ဒေါ်ခင်စောဌေးက ဆိုသည်။
ကမ္ဘာ့နိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်သည့် ဒီချုပ်ပါတီသည် ၁၉၉ဝ ခုနှစ်က ကျင်းပခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ နောက်ဆုံးရွေးကောက်ပွဲတွင် အပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော် စစ်အစိုးရက အာဏာလွှဲပြောင်းပေးရန် ငြင်းဆန်နေသလို၊ ပါတီခေါင်းဆောင် အများအပြားကိုလည်း ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။
အဖြူရောင်နှင့် အနီရောင် အချိုး ညီအောင် ရောစပ် ချယ်မှုန်းထား သော လှပသည့် နဂါးကြီးသည် ညနေဆည်းဆာ အချိန်တွင် စည်းချက်နှင့် အညီ လှလှပပ ယိမ်းယိမ်းနွဲ့နွဲ့ ကလျှက် ရှိသည်။
ခပ်ပြင်းပြင်း တီးခတ် လိုက်သော ဗုံသံနှင့် အတူ လှပ တက်ကြွနေသော အဖြူ၊ အ၀ါ၊ အနီကျား နဂါး တကောင်သည် ကွင်းထဲသို့ ၀င်လာကာ ပထမ နဂါးကြီးနှင့် အပြိုင် မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ကလေတော့သည်။
တရုတ် နှစ်သစ်ကူး အထိမ်းအမှတ် နဂါးအက ပြိုင်ပွဲကို စိတ်ဝင်စားစွာ လာရောက် ကြည့်ရှုနေ ကြသော ဧည့်ပရိသတ် မှာလည်း တရုတ်လူမျိုး များသာလျှင် မက ဗမာ၊ ကုလား စသဖြင့် လူမျိုး စုံလင်လှကာ ကြိတ်ကြိတ် တိုးလျှက် ရှိလေသည်။
"နှစ်ကူးမှာ တရုတ် နဂါး ကတာကို မြင်ရတဲ့ သူတွေက ကံကောင်းတယ်၊ လာဘ် ကောင်းတယ်လို့ အယူရှိကြတယ်၊ အဲဒါကြောင့် လာကြည့် ကြတဲ့သူက များတယ်၊ ကျနော် တို့ကတော့ ကိုယ့်အိမ်ရှေ့မှာ နဂါး လာကအောင်လည်း ဖိတ်ထားပြီပြီ"ဟု တရုတ် နဂါးအကကို လာကြည့်သူ တရုတ်လူမျိုး တဦးက ပြောဆိုသည်။
တရုတ်ရိုးရာ ပြက္ခဒိန် အရ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၆ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ အထိ နွားနှစ်ဟု သတ်မှတ် ထားကြောင်း သိရှိရသည်။
နွားနှစ်မှာ မြေဓာတ် သဘာဝကို စိုးမိုးပြီး ယင် (YIN) ဟု ခေါ်သော ဓာတ်မစွမ်းအား ပြည့်ဝသော နှစ်တနှစ် ဖြစ်ကြောင်း၊ နွားနှစ်တွင် လပေါင်း ၁၃ လ ရှိပြီး တရုတ်ရိုးရာ အယူအဆ အရ အလုပ်ကို အထူးကြိုးစား ပမ်းစား လုပ်ကိုင်ရမည့်နှစ် ဖြစ်သလို၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး စသည်တို့ အရာရာ သတိထား ဆောင်ရွက် ရမည့် အရေးကြီးသော နှစ်ဖြစ်သည်ဟု တရုတ်ရိုးရာ ဗေဒင် ပညာရှင်များမှ သုံးသပ်ကြကြောင်း တရုတ်လူမျိုးများက ဆိုကြသည်။
"အခုနှစ်က နွားနှစ်ဆိုတော့ အစစ အရာရာမှာ ကြိုးစားကြရမယ် ဆိုတဲ့ သဘောပဲ၊ အခုလို နဂါးအကပြိုင်ပွဲ လုပ်ရတာလည်း နွားနှစ်မှာ ကံကောင်းအောင် ပြုလုပ်ရခြင်း တခုပဲ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြွက်နှစ်တုန်းကလို နာဂစ်လို ဘေးဆိုးမျိုးတွေ မဖြစ်အောင် မကြုံရအောင်ပေါ့”ဟု တရုတ် ကုန်သည်ကြီးများ အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ပြောဆိုသည်။
တရုတ်နှစ်ကူး၏ အဓိက ပြယုဂ်တခုဖြစ်သော ကံကောင်းစေသည်ဟု အယူအဆရှိသော နဂါးအကကို ပြိုင်ပွဲပြု လုပ်ခြင်းအားဖြင့် တွေ့ကြုံရမည့်အခက်အခဲများကိုဖြတ်သန်းကျော်လွှား နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် တရုတ် နဂါးအကပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နဂါးအကပြိုင်ပွဲ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တဦးက ပြောဆိုသည်။
အဆိုပါ ပြိုင်ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၊ သာကေတမြို့နယ်တွင်ရှိသော Capital Hyper Mart တွင် ဇန်န၀ါရီလ ၂၃ ရက်နေ့ မှ ၂၅ ရက်နေ့ ထိ ညနေ ၃နာရီမှ ည ၉နာရီထိ ကျင်းပခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင် အသင်းပေါင်း ခြောက်သင်း ၀င်ပြိုင်ခဲ့ သည် ဟု သိရပြီး ဆုကြေးများမှာ ပထမဆုကို ကျပ် ၁၀ သိန်း၊ ဒုတိယဆုကို ကျပ် ၅ သိန်း၊ တတိယဆုကို ကျပ် ၃ သိန်း သတ်မှတ်ထားပြီးနှစ်သိမ့်ဆုများကိုလည်း ကျပ် ၂ သိန်းစီ သတ်မှတ်ထားကြောင်းတရုတ်နဂါး အက ပြိုင်ပွဲ ကော်မတီ ထံမှ သိရသည်။
နဂါးအကပြိုင်ပွဲနှင့်အတူ နှစ်ကူးဈေးရောင်းပွဲတော်များ၊ မော်ဒယ်လ်ရှိုးများကိုလည်း နှစ်ကူးပွဲတော် စည်ကားစေ ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အဆိုပါနေရာတွင်ပင် ပြုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ နဂါးအကပြိုင်ပွဲ ကျင်းပရာနေရာ Capital Hyper Mart အပြင်ဘက်တွင်လာရောက်ကြည့်ရှု့နေသော လူအုပ်ကြီးမှ ထောင်သောင်းမက များပြားပြီးကြိတ်ကြိတ်တိုးလျှက်ရှိသော်လည်း Capital Hyper Mart အတွင်း ပိုင်းတွင်မူရှေ့ကလူအုပ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လို့ မရအောင်ပင် လူနည်းပါးလှသည်ကို တွေ့ရသည်။
အစားအသောက်များရောင်းချသော နေရာတွင်သာ လူ လေးငါးဆယ်ဦးခန့် တွေ့ရပြီး၊ အ၀တ်အတထည်များ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများရောင်းချသောဆိုင်နေရာများတွင်မူ ကြည့်ရှုသူ အနည်းငယ်သာ ရှိသည် ကိုတွေ့ရပြီး၊ တရုတ်နှစ်ကူးပစ္စည်းများ ရောင်းချသော ဆိုင်များ လောက်သာလူအနည်းငယ်စည်ကားနေသည် ကို တွေ့မြင်ရသည်။
"လူတွေက နဂါးအကပြိုင်ပွဲကို လာကြည့်ရင်း ဒီထဲကိုလည်းလိုက်လျှောက်ကြည့်ကြတာ များပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တကယ်ဝယ်တဲ့သူကတော့နည်းတယ်၊ သိပ်မရောင်းကြ ရဘူး ၊ တရုတ်ပစ္စည်းတွေလောက်ပဲ ရောင်းရတာ တွေ့ တယ် "ဟုအဆိုပါ Capital Hyper Mart တွင် ရောင်းချနေသောအိမ်သုံးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် တဆိုင် က ပြောဆို သည်။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအကြပ်အတည်းကြောင့် နှစ်ကူးပစ္စည်းများမှာယခင်နှစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကရောင်းအားသိသိသာ သာကျ ဆင်းသွားကြောင်း တရုတ်တန်းရှိနှစ်ကူးပစ္စည်း အရောင်းဆိုင် တဆိုင်မှ ပြောဆိုသည်။
တရုတ်နှစ်ကူးတွင် အဓိကအသုံးပြုကြသော ရွှေစက္ကူ၊ ငွေစက္ကူများသည်အခြားပစ္စည်းများထက်စာလျှင် အရောင်း ရဆုံးဖြစ်သော်လည်း ယခင်နှစ်ကထက် ရောင်းအား ၃ ပုံ ၁ပုံ ခန့်ထိ ကျသွားသည်ဟု အရောင်းဆိုင်များကပြော ဆိုကြသည်။
"မနှစ်တုန်းကတော့ အိမ်က ကလေးတွေကော တူတွေတူမတွေကော အားလုံးကို အ၀တ်သစ် ၂ စုံစီ ၀ယ်ပေးနိုင် တယ်၊ ဒီနှစ်တော့ သားသမီးတွေကိုလည်း တစုံစီပဲဝယ်ပေးနိုင်တယ်၊ တူတွေအတွက်ကိုတော့ အန်ပေါင်း (မုန့်ဖိုးငွေ) ပဲပေးနိုင် တော့မယ်"ဟု နှစ်ကူးချိန်တွင် အ၀တ်အစားသစ် ၀ယ်ယူခြင်းသည် မင်္ဂလာဖြစ်သည်ဟု လက်ခံထားသောအသက် ၄၅ နှစ်အရွယ် တရုတ်အမျိုးသမီးကြီးတဦးကပြောသည်။
တရုတ်လူမျိုးတို့၏ အယူအဆအရနှစ်သစ်ကူးချိန်တွင် အ၀တ်အစားအသစ်များ ၀ယ်ယူဝတ်ဆင်ခြင်း၊ ဆွေမျိုး များအား လက်ဆောင်ပေးခြင်း၊ အန်ပေါင်းပေးခြင်း၊ တီကွေ့လို နှစ်ကူးမုန့်လုပ်ပြီး မိတ်ဆွေများရဲ့ အိမ်များ ကိုဝေငှကြခြင်းများပြုလုပ်ကြပြီး၊ နှစ်သစ်ကူးချိန်မှာ မင်္ဂလာရှိသောစကားများကိုသာ ပြောဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်ကြ ကြောင်း နှစ်သစ်မှာ အသက် ၆၀ပြည့်မည့် တရုတ်အမျိုးသားကြီး တဦးက ပြောဆိုသည်။
"နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာ အလုပ်လုပ်ရင် တနှစ်လုံးပင်ပန်းတယ်လို့ အယူရှိကြတော့ တော်ရုံလူတွေက မလုပ်ကြ တော့ဘူး၊ အလှူပေးတာတွေ ဘုရားစုံလိုက်ဖူးတာတွေပဲလုပ်ကြတယ်" ဟု သူက ဆိုသည်။
သို့သော်လည်း တချို့မှာမူ နှစ်သစ်ကူးချိန်တွင်နှစ်သစ်ကူးပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ပင် အလုပ်လုပ်နေကြရ သည်ကို တွေ့မြင်ရသည်။
တရုတ်လူမျိုးတဦးဖြစ်သော အသက် ၆၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးကြီးသည် တရုတ်တန်းတွင် တရုတ်နှစ်ကူးပွဲ အသုံးပြုသော ပန်းစက္ကူများအား ယနေ့ထိတိုင် ရောင်းလျက်ရှိသည်ကို တွေ့မြင်ရသည်။
သူမသည် နှစ်သစ်ကူးနေ့တွင် အလုပ်လုပ်ပါက တနှစ်လုံးပင်ပန်းမည်ဟူသောတရုတ်အယူအဆကို သိသော် လည်း နှစ်သစ်ကူးပွဲ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ငွေလိုသောကြောင့် စက္ကူပန်းများ ရောင်းနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ ပြီးခဲ့သောနှစ်ကလည်း နှစ်ကူးတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အစားအသောက်ခြိုးခြံကာယခုကဲ့သို့ပင် ငွေရှာခဲ့ရ ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
"နှစ်ကူးမှ မလုပ်နိုင်တဲ့ တရုတ်လူမျိုးဆိုရင် မင်္ဂလာမရှိဘူး၊ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် မကောင်းစားဘူးလေ၊ အဲဒါကြောင့် အရောင်းအ၀ယ်တွေကမကောင်းပေမယ့်လည်း နှစ်ကူးတော့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပမ်းစားလုပ်ရတာပဲ၊
နဂါးလာကအောင်လည်း ဖိတ်ထားရတာပဲ" ဟု သူက ဆိုသည်။
ကွမ်းတုံလူမျိုးများသည် ဘုရားပန်း၊ ဒေါင်းပန်းများကိုဘုရားပူဇော်ခြင်းဖြင့် မိမိတို့သားသမီးများ ပညာရေးထွန်း ပေါက်မည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့် သူမ ထံမှ စက္ကူပန်းများကို ၀ယ်ယူကြကြောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ တရုတ် လူမျိုး အများအပြားနေထိုင်ရာ တရုတ်တန်းတွင်သူမကဲ့သို့ပင် နှစ်ကူးချိန်အတွက် ကုန်ကျမည့် စရိတ်ရစေရန် ယနေ့ ထိတိုင်ဈေးဆိုင်များဖွင့်ကာ ရောင်းချနေကြသော တရုတ်လူမျိုးများရှိနေကြောင်း သူမကပြောဆိုသည်။
တရုတ်လူမျိုးတို့အနေနှင့် နဂါးလာကသည့် အိမ်မှာ လာဘ်ကောင်းသည်ဟူသောအယူအဆကြောင့် ဖိတ်ကြပြီး၊ နဂါးလာကသည့်အခါ အိမ်ရှင်အနေနှင့်အန်ပေါင်းပေးရပြီး၊ အန်ပေါင်းမှာလည်း လာကသည့် လူများကို ကြည့်ကာ ကိုယ်တတ်နိုင်သည့် ပမာဏတခုသတ်မှတ်ပြီး ပေးကြရကြောင်း၊ နဂါးလာကသည့်အဖွဲ့တွေကလည်း နှစ်ကူးမှာ ခုလို ကနိုင်ရန်အတွက် ၂ လကျော်ကျော်ခန့်ကြိုတင်အချိန်ယူကာ လေ့ကျင့်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်လူမျိုးများအနေနှင့် နှစ်ကူး၏ အဓိက အနှစ်သာရ တခုဖြစ်သောဘိုးဘွားတွေကို ကန့်တော့ခြင်း၊ အိမ်ရှိ လူ ကုန် အ၀တ်အစားအသစ် ၀တ်ဆင်ခြင်း၊ ဆွေမျိုးသားချင်းများအား အန်ပေါင်းပေးခြင်း၊ မိတ်ဆွေများအားနှစ်ကူး အစားအစာများ လိုက်လံဝေငှခြင်း၊ လာဘ်ကောင်းစေသည်ဟု အယူအဆဖြစ်သောနဂါးလာကစေခြင်း၊ ညစာမှာ ငါးကို စားသုံးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ကြရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် နှစ်ဆန်း ၈ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော မိုးနတ်မင်း ကို ပူဇော်ကန်တော့ပွဲလည်း ကျင်းပကြကြောင်း သိရှိရသည်။
"ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ပမာဏအလျောက်လုပ်ကြရတာပဲ ကျနော်တို့ကတော့ မနှစ်က သိန်း၂၀ လောက် ကုန်တယ်၊ ခုနှစ်လည်း သိန်း ၂၀ ၊ ၃၀ လောက်ကုန်မှာပဲ၊ ဒါကတော့မတွက်ကောင်းဘူးပေါ့၊ မတတ်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့ အနည်းဆုံး စုစုပေါင်း ၁ သိန်း၂ သိန်း လောက်တော့ ကုန်ကြတာပဲ" ဟု တရုတ်လူမျိုးတဦးက ပြောဆိုသည်။
တရုတ်နှစ်ကူးပြုလုပ်ရန်အတွက် တနှစ်လုံးဝင်ငွေမှ ရာခိုင်နှုန်း မည်မျှသုံးစွဲမည်ဆိုသည်ကို သတ်မှတ်ထားသူများ ရှိသည် ဟု သိရသည်။
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ Jan,30th,2009
( 61 )Burmese Army checks KIO casinos for "kidnapped Chinese"
( 60 )Forever at the Frontline
( 59 )အမျိုးသမီး ၇ ဦးကို လူကုန်ကူးသည်ဟု စွပ်စွဲကာ ဓာတ်ပုံများဖြင့် ကြော်ငြာ
( 58 )Raids in Rangoon Yield More Heroin
( 57 )AI Calls for Access to Rohingya
( 56 )ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူ မကွေးရဲစခန်းတွင် ချုပ်ခံထားရဆဲ
( 55 )Global Slump Hits Burmese Crop Growers, Traders
( 45 )ချင်းတောင်ပိုင်း မြို့နယ်များတွင် ရောဂါထူပြောလာဟု အန်ဂျီအိုပြော
( 53 )Chinese new year lion dance contest ends in Myanmar
( 52 )ရန်ကုန်တွင် ဘိန်းဖြူများ ဖမ်းမိ
( 51 )Utah plans housing subsidies for refugees hit by recession
( 50 )နာဂစ်၏ ၀ိဥာဉ်များ ကျန်ရစ်သူများကို ခြောက်လှန့်နေဆဲ
( 49 )Myanmar to hold cyclone-related sculpture product exhibition next month
( 48 )ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာအစ မြန်မာပြည်က
( 47 )A Closer Look at Burma's Ethnic Minorities
( 46 )Poverty drives Myanmar Rohingyas into death traps
( 45 )မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး မရှိကြောင်း နအဖ စစ်အစိုးရမှ ကျေညာ
( 44 )မောင်တောတွင် ဗမာလူငယ် ၃ ဦး စစ်ယူနီဖေါင်းနှင့် အတူ ဖမ်းဆီးခံရ
( 43 )Indonesia to repatriate stranded Rohingyas refugees
( 42 )အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြင့် တပ်မတော်သား ၃ဦးကို တိုင်ချက်ဖွင့်
( 41 )Junta denies Rohingya boat people are from Burma
( 40 )ဒေါ်ဝင်းမြမြ အပါအ၀င် ခြောက်ဦးအမှု တရားရုံးချုပ်သို့ အယူခံတင်
( 39 )Ministry finds human trafficking signs on Myanmar boat people case
( 38 )မီးပျက်၍ အိမ် ၂ လုံး မီးလောင်
( 37 )Indonesia says Myanmar boat people 'economic migrants'
( 36 )UN special envoy to meet with Aung San Suu Kyi in Myanmar
( 35 )Burma refuses to recognize Rohingya as citizens
( 34 )ငွေဆောင်ကမ်းခြေ ဆိုင်ကယ်မစီးရ ဧရာဝတီ ဒု-တိုင်းမှူး အမိန့်ထုတ်
( 33 )US Envoy to UN Signals Support for ‘R2P’
( 32 )ရွေးကောက်ပွဲကို မွန်နိုင်ငံရေးပါတီကြီးများ မထောက်ခံမွန်ပြည်သစ်ကို လက်နက်မချခိုင်းရန် တိုင်းမှူးအာမခံ
( 31 )Is thereaholistic approach to Burma’s refugee problem?
( 30 )ကြွက်နှိပ်စက်သည့် ချင်းပြည်နယ် ၂၀၀၉ ထိ ရိက္ခာစိုးရိမ်ရ
( 29 )Myanmar to hold industrial exhibition next month
( 28 )မြန်မာပြည် ဒေသသုံးခု၌ ဆန်ပြတ်လပ်မည်ဟု ကုလ ထုတ်ပြန်ကြေညာ
( 27 )Rohingya not recognized as ethnic group in Myanmar
( 26 )Myanmar-Thai bilateral trade hit over $2 bln in eight months of 2008-09
( 25 )မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုတာ မရှိဟု စစ်အစိုးရပြော
( 24 )Refugee applications in Japan hit record 1,599 in 2008
( 23 )Children exploited as cheap labour in Myanmar
( 22 )ရှမ်းခေါင်းဆောင် ဦးရွှေအုံး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး ပြင်ဆင်နေပြီ
( 21 )Burma junta promises 'measures' over Rohingya
( 20 )EU to provide Myanmar more humanitarian assistance
( 19 )သစ္စာသရဖူကျောင်းတိုက်မှ ဦးအာနန္ဒာ အင်းစိန်ထောင်၌ ပျံလွန်တော်မူ
( 18 )A mission to Burma
( 17 )အာဆီယံ အဆင့်မီ ရဲစခန်းများဆောက်ရန် ဈေးဆိုင်ခန်းများကို ဖျက်ခိုင်း
( 16 )New Thai Premier Seen as Leaning Right
( 15 )Burma's Misery Gobalised
( 14 )ခေါ်ဘူဒဲ၌ ကချင်ဒေသခံများ၏ ရွှေတွင်းများကို အာဏာပိုင်တို့ သိမ်းယူ
( 13 )Don’t send us back to Myanmar, beg Rohingyas
( 12 )ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ရဲ့ညီ ရဲဖက်စခန်း၌ စိုးရိမ်ဖွယ် အခြေအနေရှိ
( 11 )Myanmar denies Rohinja as ethnic minority
( 10 )Rohingyas plead with Indonesia for refuge
(9)Cyclone Victims Need Help To Rebuild Livelihoods
( 8 )ဂမ်ဘာရီဖြေရှင်ရန် ရွေးကောက်ပွဲထက် ပိုအရေးကြီးသည်များ ရှိ၏ဟု အဖွဲ့ချုပ်ပြော
(7)အေရှားဝေါလ် ဆိပ်ကမ်းမှ ဘိန်းဖြူဖမ်းမိ
(6)Burmese suffer at the hands of Asean and Asia
(5)ဖမ်းဆီးခံ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ကုလ တွေ့ခွင့်ရပြီ
(4)Rats and cyclone leave nation without food
(3)Injured asylum seekers beg not to be sent back
(2)ဒိန်းမတ်ဝန်ကြီး မြန်မာခရီးစဉ် ဥရောပသမဂ္ဂ ဘုံသဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖောက်ဟု ဝေဖန်ခံရ
( 1 )Truth as Casualty
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ပျက်ပြားနိုင်ဟု နအဖ စစ်ဗျူးဟာမှူးပြော
ယခုလ ဆန်းပိုင်း၌ ကွန်ဟိန်းအခြေစိုက် နအဖ စစ်ဗျူဟာမှူး ကြီးမှူး၍ဌာနပေါင်းစုံ ၀န်ထမ်းများအစည်းအဝေး ဆင့်ခေါ် ကျင်းပရာ “အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ပျက်ပြား/ ရက်ပြောင်းနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း" ထည့်သွင်း ပြောကြား သွားသည်ဟု ထိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ ၀န်ထမ်းတဦးကဆိုသည်။
ယခုလ ၂ ရက်နေ့ကသျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ကွန်ဟိန်းအခြေစိုက် နအဖ စစ်ဗျူဟာမှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတင်မောင်ရွှေမှ ကွန်ဟိန်းမြို့ပေါ်ရှိ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ မြေတိုင်း၊ ရဲ၊ မီးသတ်၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ မိခင်ကလေးများအသင်းမှအစ မော်တော်ယာဉ်လိုင်း ပါမကျန် ၀န်ထမ်းများစုံညီ အစည်းဝေးဆင့်ခေါ်ကျင်းပခဲ့ကြောင်း၊ ထိုအစည်းအဝေး၌ - “၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တော့မယ်၊ အစီ အစဉ်ပြောင်းရွှေ့ရင်ပြောင်းမယ်” ဟုထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခဲ့သည် ဟုဆိုသည်။
အသက် ၄၀ ကျော် ၀န်ထမ်းတဦးက - “၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာက အကြောင်းရပ် ၄ ခုရှိတယ်လို့ ပြောတယ်။ (၁) ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖျက်အမှောင့်/သောင်းကျန်းသူတွေ စီမံကိန်းနဲ့ ၀င်ရောက်နှောင့်ယှက်မယ်လို့သတင်း ရထားလို့၊ (၂) ရခိုင် ဘက်က ဂက်စ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ နဲ့ နယ်ခြားပြဿနာ၊ (၃တိကျတဲ့လူဝင်ထွက်/ သန်းခေါင် စာရင်း မှတ်ပုံတင်မပြီးပြတ် နိုင်သေးတာရယ် (၄) မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက် မပြီးပြတ်သေးတဲ့ပြဿနာကြောင့် ဆိုဘဲ”- ဟု ပြန်လည်ပြောပြ၏။
ယခုလ ၂၀ ရက်နေ့တွင်လည်း ဗျူဟာမှူးကြီး ဒုဗိုလ်ကြီးတင်မောင်ရွှေက ကွန်ဟိန်းမြို့ တာကော်အုပ်စု ဟန်နားရွာ နှင့် ဖန်လန်းရွာ မှ ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်များကိုဆင့်ခေါ်၍ သျှမ်းသူပုန်ချေမှုန်းရန်အတွက် နအဖ စစ်ကြောင်း နှင့်အတူ ရှေ့တန်းတက်ဖို့ ပြည်သူ့ စစ်များအားစစ်ရေး လေ့ကျင့်ခိုင်းပြီး အော်တိုသေနတ်လည်းထုတ်ပေးမည်ဟုဆို၏။
ကာလိကျေးရွာအုပ်စုမှ အသက် ၂၀ ကျော် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ရောင်းဝယ်သူတဦးက - “ကျနော်တို့ကတော့ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်ဖြစ် စိတ်မ၀င်စားဘူး။ အဲဗျူဟာမှူးလည်းသိပ်မခေပါဘူး - သူရောက်လာကတဲ့က အိမ်အလုပ်ကိုကောင်း ကောင်း မလုပ်ရဘူး၊ ပြည်သူ့စစ်ဆို တကဲ့စစ်သားအတိုင်း စစ်ရေးအဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်ခိုင်းတယ်။ နောက်ပြီး ရွှေတိဂုံ ပုံတူ စေတီပြုပြင်မွမ်းမံဖို့ ကျနော်တို့အုပ်စုကို ၀ါးလုံးအလုံးရေ ၁၀၀၀ ဆင့်ခေါ်ထားသေးတယ်” - ဟုဆို၏။
ဂျောက်ဂျက်ဂယက် -အမျိုးသမီးများ၏ အသံ
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ဂယက်ရိုက်နေသော ဟစ်ဟော့အဆိုတော် ဂျောက်ဂျက်၏ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ သီချင်းစာသားများအပေါ် ထားရှိသည့် အမြင်သဘောထားကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့ရှိ နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးက အမျိုးသမီး ၅ ဦးကို ဆက်သွယ်မေမြန်းကြည့်ရာ သူတို့က သီချင်းစာသားများသည် ကြမ်းတမ်း၊ ရိုင်းပြသည်ဟု တညီတညွတ်တည်း ဆိုကြသည်။
သူတို့သည် သတင်းထောက်၊ ဒါရိုက်တာ၊ ဘလော့ဂ်ဂါ၊ ကွန်ပြူတာနည်းပညာရှင်၊ အရပ်သူတို့ဖြစ်သည်။ သူတို့၏ အမည်များကိုမူ ထည့်သွင်း အသုံးမပြုရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ကြသည်။
ဂျောက်ဂျက်၏ ခိုးကူး ခွေများမှာမူ ရန်ကုန်မြို့တွင် အတိုင်းအတာတခုထိ ပျံ့နှံနေပြီး လူပြောများနေသည်။
အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် ဂျောက်ဂျက်အား ယခုလလယ်ပိုင်းက စာပေစိစစ်ရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဂီတအစည်းအရုံးက ခေါ်ယူကာ ခံဝန်ကတိ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့သည်။ သူသည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်က ဟစ်ဟော့လောကထဲသို့ စတင် ၀င်ရောက်လာသူဖြစ်ပြီး အမည်ရင်းမှာ ဇင်မင်းလွင် ဖြစ်သည်။
ဂျောက်ဂျက်အင်တာဗျူးများ ဖော်ပြထားခဲ့ဖူးသော မြန်မာအိုင်အာစီနှင့် မြန်မာစကားဝုိုင်းဘလော့ဂ်တွင် ယခုအခါတွင် ဂျောက်ဂျက်နှင့် ပတ်သက်သော သီချင်းဆွေးနွေးချက်များ မတင်ရဟူ၍ ကန့်သတ်ထားသည်။
အမျိုးသမီးများ၏ အမြင်များကို မဇ္ဈိမသတင်းထောက် ဖနိဒါက စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။
အသက် ၂၀ နှစ်အရွယ် သတင်းထောက်
အခု လူငယ်တွေက Hip hop ကို ကြိုက်တယ်။ အရင်ထက် လွတ်လပ်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာကို လက်ခံပေမယ့် မြန်မာမိန်းကလေးတွေကို စော်ကားပြီး ပြောနေတာက ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ ယမ်းပြီး ရိုက်သလို ခံစားရတယ်။
ဒီကောင်ဆိုတာကတော့ ရိုင်းတယ်။ ဒါကို နိုင်ငံရေးသမားတွေက လိုင်းပေါ်တင်လိုက်တယ်။ အဲလိုပဲ မြင်တယ်။ ထွက်ပေါက်လို့ နိုင်ငံရေးသမားတွေက ပြောကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထွက်ပေါက်က လမ်းမှားနေတယ်။ ဒါမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် သာမန်အရပ်သူ
ကန့်ကွက်သင့်တာပေါ့။ ဒီလိုမျိုး မဆိုသင့်ဘူးလို့။ အခု အမြန်ဆုံး ပိတ်သင့်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ထောင်တောင် ချသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်ရှင်။
ကျမ မကြိုက်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အရမ်းရိုင်းတယ်။ ဒီသီချင်း စာသားတွေ ညစ်ပတ်တယ်။ သူ့ကို ဆိုခွင့်မပြုရဘူး။ အရမ်းကို ရိုင်းတယ်။
သူ့ကို ပြောချင်တယ်။ မင်းဟာ ရိုင်းစိုင်းပြီးတော့ အရမ်းကို မိုက်ရိုင်းတဲ့ လူပဲ။ မင်း အရမ်း ရှက်သင့်တယ်။
အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် ကွန်ပြူတာနည်းပညာရှင်
ဒါဟာ အနုပညာမဟုတ်ဘူး။ အနုပညာဆိုတာက နူးညံ့ယဉ်ကျေးတယ်။ အခုက Hip hop တွေကနေ အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ ပြောချင်တယ်။ ဂျောက်ဂျက်ဟာ ပညာအဆင့်တန်းနိမ့်ကျတဲ့သူပဲ။ သူ့မိသားစု တကွဲတပြား နေရတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် သူက အမျိုးသမီးတွေအပေါ် စိတ်ပျက်၊ စိတ်တိုနေတာလည်း ဖြစ်မယ်။ ကျမ တယောက်ထဲရဲ့ ခံစားချက်ကတော့ သူ့ကို အထင်သေးတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအကြောင်း ဆိုထားတဲ့ သူ့သီချင်းနဲ့ တခြား သီချင်းတချို့ကိုပါ အကုန်လုံးကိုတော့ မပြောပါဘူး။
ကျမထင်တာက ကျမတို့ သူ့ကို ပညာပေးသင့်တယ်လို့ ထင်တယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ အမျိုးသမီးတွေဆိုတာ ဘာလဲ။ နောက်ပြီးတော့ အမျိုးသားတွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ တန်းတူညီမှုဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာမျိုးတွေကိုပေါ့။
လူငယ်တွေကြားမှာ ပြောနေကြတာ။ တော်တော်လေး မိုက်ရိုင်းတဲ့ စကားလုံးတွေ ပါတဲ့အတွက် မိန်းကလေးတွေကို ပြောတယ်ဆိုတာက အကောင်းအဆိုးတော့ ရှိမှာပဲလေ။ ဒီလိုတော့ မပြောသင့်ပါဘူး။ ဒီသီချင်းက ဆင်ဆာတောင် လက်မခံတဲ့ သီချင်းလေ။ ဒီလိုသီချင်းကို ပိတ်ပင်သင့်ပါတယ်လေ။ ပြီးတော့ ဒို့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်း အရမ်းကို မလေးစားတော့သလို ဖြစ်လာတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ကန့်ကွက်ရမယ်။ တကယ် ပျက်စီးနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ညွှန်းပြီးဆိုတယ် ဆိုရင်တောင် ဒီလိုတော့ မပြောသင့်ပါဘူး။
စစ်အစိုးရ တရားရုံးများ တိကျမှန်ကန်သည့် တရားစီရင်ရေးစနစ်ပျောက်ကွယ်နေ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိကျမှန်ကန်သည့် တရားစီရင်ရေးစံနစ် ပျောက်ကွယ်နေပြီး အဂတိ လိုက်စားမှုများနှင့်သာ ပြည့်နေသည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီက ယနေ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေး ကိစ္စရပ်များကို မှန်ကန်သည့်လမ်းကြောင်းသို့ ဦးတည်နိုင်ရန်အတွက် ဖိအားပေးတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ၊ ဥပဒေရေးရာသုံးသပ်ရေးအဖွဲ့ တာဝန်ခံ ဦးမျိုးကပြောသည်။
"ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးရဲ့ အမိန့်တစုံတရာနဲ့တင် မှတ်သားလောက်သည့် ပြစ်ဒဏ်ချမယ် ဆိုတာက ဥပဒေ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ၊ ဥပဒေအတိုင်း လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ အဲဒီအတွက် ကျနော်တို့က တရားရုံးတွေ ကို တဖက်က တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကို ကျနော်တို့က မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်း ရောက်အောင် တောင်း ဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။"
မြန်မာအစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်က ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလမှ စက်တင်ဘာလ ထိ (၉)လအတွင်း အဂတိလိုက်စားမှုပေါင်း ၄၄၈ မှုရှိသည်ဟု ပြောဆိုထားသော်လည်း အပြစ်ပေး အရေးယူမှုများအား တိကျ မှန်ကန်စွာ ထုတ်ဖော်ထားခြင်းမရှိဟု ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်၏ အမှုတွဲအပါအ၀င် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်နွယ်သူများ ကျုးလွန်သည့် အဂတိလိုက်စားမှု၊ အမှုတွဲများကို ဆုံးဖြတ်ရာ၌ တိကျသည့်အပြစ်ပေးမှုများ မရှိပဲ နောက်ဆုံး အမှုတွဲများပါ ပျောက်ဆုံးသွားပြီး လက်ရှိ် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အမှုတွဲများကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရာ၌ တရားဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီ်မှုမရှိပဲ အဂတိလိုက်စားမှုများ ရှိနေသည်ဟုလည်း ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
"လှုပ်ရှားသူတွေ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို ချနေတာကလည်း ဥပဒေကြောင်းရာနဲ့ တစ်ခုနဲ့မှ မညီညွတ်ဖူးခင်ဗျ။ တဖက်သတ်ဘက်လိုက်မှုနဲ့ တရားစီရင်နေတာကိုတွေ့ရတယ် နောက် လှုပ်ရှားမှု မဟုတ်တဲ့ သာမန်အရပ်သူ အရပ်သားတွေပေါ်မှာလဲ ညဉ်းဆဲနေတာ တွေ့ရတယ်။ ငွေမပေးရင် တရား မနိုင်ဘူး ငွေပေးမှတရားနိုင်မယ် ဘယ်ရုံး၊ ဘယ်ကဏ္ဍမှာ ကြည့်ကြည့်ဗျာ တရားစီရင်ရေးဂွင် တစ်ခု လုံးမှာ လာတ်မစားတဲ့နေရာ တစ်ခုမှမရှိဘူး အဲတာကမ္ဘာက သိတယ်။"
၂၀၀၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ(၁၁)ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မြင်းခြံဒီဂရီကောလိပ် ကျောင်းသား မန်ဘူခီး သတ်ခံရမှုတွင် ဌာနဆိုင်ရာမှ အဂတိလိုက်စားမှုများရှိနေသည့် အတွက် အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်ရေးကို ဖော်ဆောင် ကြရန် တရားရေးဝန်ထမ်းများတွင် တာဝန်ရှိသည်ဟု ဖော်ပြသည်။
အဂတိလိုက်စားမှုများကိုအရေးယူရာ၌ ဘက်လိုက်မှု များဖြစ်ပေါ်နေသည့်အတွက် အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်မှုမရှိဘဲ လူထုတစ်ရပ်လုံး နစ်နာနေရသည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီက ဝေဖန်ထောက်ပြထားသည်။
မဲကသာတောအတွင်း ဌေးကုမ္ပဏီ သစ်ထုတ်ခွင့် အပိတ်ခံရပြီး
ခရိုင်အောက်ခြေအရာရှိများနှင့် သဘောတူချက်ယူပြီး မဲကသာတော လော်ဘာချောင်းဖျား၌ သစ်ထုတ်လျှက်ရှိသော ဌေးမိသားစု ကုမ္ပဏီလီမီတက်အား သစ်ဆက်လက်လှဲဖြတ်ခြင်းမပြုရန် ဒူပလာယာခရိုင် (ကော့ကရိတ်ခရိုင်) အထက်အရာရှိများမှ တားမြစ်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
ဒူပလာယာခရိုင် အတွင်းရေးမှုး စောလစ္စတန်၏ ပြောပြချက်အရ မဲကသာတောအတွင်း ဌေးကုမ္ပဏီသစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများ မိမိတို့၏ ဘိုးဘွားလက်ထက်မှစ၍ ထိန်းသိမ်းခဲ့သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးရသည့်အကြောင်းကို ခရိုင်ရုံးသို့ စာရေးသားအကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်း၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၉) ရက်နေ့၌ ပြုလုပ်သော မဲကသာသစ်တောအစည်းအဝေးမှ ၄င်းကိစ္စကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း ပြောသည်။
“ဒေသခံတွေ ပြောတာကတော့ ကျနော်တို့ ဒီတောကို ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ထိန်းသိမ်းလာခဲ့တယ်။ လူကြီးမင်းတို့က လူထုနဲ့ ပိုက်ဆံထုတ်ကို လဲလိုက်ပြီလား။ နောင်ဆို ကျနော်တို့ ထမင်းထုပ်ကို လူကြီးမင်းတို့ မစားကြတော့ဘူးလားလို့ ပြောတယ်” ဟု ခရိုင်အတွင်းရေးမှုးက ရှင်းပြသည်။
နို့တကောခရိုင်အတွင်းရှိ ကျေးရွာပေါင်း (၂၀) ကျော်မှ လူထုကိုယ်စားလှယ်များမှ ခရိုင်အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ အထက်ပါအကြောင်းကို တင်ပြခဲ့ပြီး မဲကသာသစ်တောအစည်းအဝေးမှ ယခုကဲ့သို့ သစ်ထုတ်လုပ်ခွင့် တားမြစ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မဲကသာ တားမြစ်ဘေးမဲ့ကြိုးဝိုင်းတောအတွင်း ဌေးမိသားစုကုမ္ပဏီလီမီတက်မှ သစ်ထုတ်လုပ်ခွင့်ရရှိရန်အတွက် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) လက်အောက်ရှိ ဒူပလာယာခရိုင် နို့တကောမြို့နယ် (ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ တပ်ရင်း (၁၇)၊ ခရိုင်သစ်တောရုံးအုပ်တို့နှင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်း၌ သဘောတူချက်ရရှိထားပြီး ပျဉ်းကတိုးသစ် တန် ၃၀၀၀ ထုတ်လုပ်ရန် စပေါ်ငွေ ကျပ်သိန်း (၅၀) ပေးဆောင်ထားသည်ဟု KNU အသိုင်းအဝိုင်းမှလာသော သတင်းက ဆိုသည်။
၄င်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ KNU လက်အောက်ရှိ ဒူပလာယာခရိုင် သစ်တောရုံးသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ၄င်းကိစ္စကို မိမိတို့ပြောကြားခွင့်မရှိကြောင်း ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလမှစ၍ ၄င်းကုမ္ပဏီမှ သစ်ဖြတ်စက် (၁၀) လုံးကျော်နှင့် မဲကသာကြိုးဝိုင်းတောအတွင်းရှိ သစ်များကို စတင်ဖြတ်လှဲခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာလကုန်၌ သစ်တန်ချိန် (၂၅၀၀) ခန့်ကို ဖြတ်လှဲပြီးစီးပြီဖြစ်ကြောင်း ၄င်းကုမ္ပဏီမှ သစ်လုပ်သားတစ်ဦးက ပြောသည်။
KNU နှင့် နီးစပ်သောသတင်းအရ ဌေးကုမ္ပဏီသည် ဒီဇင်ဘာလကုန်မှစ၍ သစ်ဆက်လက်လှဲဖြတ်ခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ခံရပြီး လှဲဖြတ်ပြီးသော သစ်များကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလအတွင်း မဲကသာတောမှ အပြီးပြတ် သယ်ထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
KNU မှ သစ်ဆက်လက်လှဲဖြတ်ရန် တားမြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဌေးကုမ္ပဏီ အကျိုးဆောင်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ၄င်းက KNU မှ တားမြစ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ ဌေးကုမ္ပဏီမှ သစ်လှဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း ပြီးစီးပြီးဖြစ်၍ ရပ်နားထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း၊ ဖြတ်လှဲပြီးသော သစ်များကို သယ်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံးပမ်းနေရကြောင်း ပြောသည်။
ဌေးကုမ္ပဏီသည် ဒူပလာယာခရိုင် ဝင်းရေးမြို့နယ် (ကရင်ပြည်နယ် ဘုရားသုံးဆူမြို့နယ်ခွဲ) အနန်းကွင်းဒေသ၌ သစ်ထုတ်ရန်အတွက် စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်များထံမှ သစ်ထုတ်ခွင့် ရရှိထားပြီး ၄င်းအနန်းကွင်းဒေသ၌ သစ်ရှားပါးမှုကြောင့် KNU ထိန်းချုပ်ဒေသဖြစ်သော မဲကသာကြိုးဝိုင်းတောအတွင်းရှိ သစ်များကို ခရိုင်အောက်ခြေအရာရှိအချို့နှင့် သဘောတူချက်ယူပြီး ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
၄င်းပြင် မဲကသာတောမှ သစ်များကို ပြည်တွင်းသို့ သယ်ထုတ်မည်ဆိုပါက မဲကသာ၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး၊ ချောင်းနှစ်ခွ၊ မုဒုံလမ်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါလျှက် ၄င်းလမ်းကို အသုံးမပြုပဲ မဲကသာ၊ တောင်ဝိုင်း၊ အနန်းကွင်း၊ ဝင်းဖနုံရေလှောင်တမံ (အဘစ်)၊ မုဒုံလမ်းကို ကွေ့ပတ်၍ လမ်းသစ်ဖောက်လုပ်ခြင်းမှာ စစ်အစိုးရထံမှ တရားဝင်ရရှိထားသော သစ်ထုတ်လုပ်ခွင့်ကို ပြသလိုခြင်းဖြစ်သည်ဟု KNU အသိုင်းအဝိုင်းမှလာသော သတင်းကဆိုသည်။
ယခုအချိန်၌ လမ်းဖောက်လုပ်ပြီးစီးပြီဖြစ်၍ ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်း၌ ဖြတ်လှဲပြီးသောသစ်များကို သယ်ထုတ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသော်လည်း ဌေးကုမ္ပဏီမှ ကားများအတွက် အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ လုံခြုံရေး မပေးနိုင်သောကြောင့် ရန့်တန့်ထားရကြောင်း ဌေးကုမ္ပဏီမှ သစ်များကို မဲကသာတောမှ ဝင်းဖနုံရေလှောင်တမံ (အဘစ်ကျေးရွာ) လမ်းဝသို့ အငှားတိုက်ပို့ဆောင်ပေးမည့် ကားပိုင်ရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
ယခုမဲကသာ သစ်ထုတ်လုပ်ငန်း၌ ထင်ရှားသော ဌေးကုမ္ပဏီမှာ ယခုတပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေး အရာရှိချုပ်၊ ယခင် ရန်ကုန်တိုင်း တိုင်းမှုး ဗိုလ်ချုပ်လှဌေးဝင်း ပိုင်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး ဦးတေဇပိုင် ထူးကုမ္ပဏီနှင့် ပူပေါင်း၍ ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဘုရားသုံးဆူမြို့မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ရဲအထူးသတင်းတပ်ဖွဲ့ (အက်စ်ဘီ) အသိုင်အဝိုင်းမှ လာသော သတင်းများက ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေကို နေပြည်တော်က ဆင့်ခေါ်
ဆော်လမွန် ဇန်နဝါရီလ 29 2009
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ အကျယ်ချုပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး လျှောက်လှဲချက်အပေါ် ဆွေးနွေးလိုပါသည်ဟု ဆိုကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေကို နေပြည်တော်က ဆင့်ခေါ်ခဲ့သည်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်အတွက် နေပြည်တော်ရှိ ရှေ့နေချုပ်ရုံးသို့ အင်္ဂါနေ့တွင် လာရောက်ပါရန် ရန်ကုန် သတင်းရဲတပ်ဖွဲ့က ဦးကြည်ဝင်းကို လွန်ခဲ့သည့် စနေနေ့တွင် အကြောင်းကြားခဲ့သည်။
နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေသော ဦးကြည်ဝင်းမှာ သွားရောက်နိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် ဗဟိုတရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ ဦးလှမျိုးမြင့်ကို ကိုယ်စားလွှတ်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း သဘောတူခဲ့သည်။ ဇန်န၀ါရီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ဦးလှမျိုးမြင့်က ခရီးထွက်ရန် ဘူတာရုံသို့ အဆင်းတွင် အစည်းအဝေးကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်း သတင်းရဲတပ်ဖွဲ့ အရာရှိများက အကြောင်းကြားခဲ့သည်။
"တင်္နလာနေ့မှာ (ဦး) လှမျိုးမြင့်က နေပြည်တော်သွားဖို့ ရထားပေါ် တက်မလို့ လုပ်တုံး အက်စ်ဘီအရာရှိတွေ ရောက်လာပြီး မသွားတော့ဖို့ တားတယ်" ဟု ဦးကြည်ဝင်းက ပြောသည်။
"အက်စ်ဘီအပြောအရတော့ လျောက်လှဲချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးချင်လို့တဲ့" ဟု ဦးကြည်ဝင်းက ပြောရင်း အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
နိုင်ငံတော်ကို နှောင့်ယှက် ဖျက်ဆီးသူများ၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်သည့် ဥပဒေဖြင့် စစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရန်ကုန်မြို့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ သူ၏ နေအိမ်တွင် အကျယ်ချုပ်ချထားသည်။
တည်ဆဲဥပဒေအရပင် ရက်လွန်ချုပ်နှောင်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်စုဘက်က စောဒက တက်ထားသည်။ ဥပဒေအရ အများဆုံး တဆက်တည်း ၅ နှစ်သာ ရုံးမတင်ဘဲ ချုပ်နှောင်ထားခွင့် ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
နအဖအစိုးရက အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်၏ နေအိမ် အကျယ်ချုပ် သက်တမ်းကို ယမန်နှစ် မေလ က နောက်ဆုံးအကြိမ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရ၏ ဥပဒေ အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်အရ လူတဦးကို ၆ နှစ်အထိ ချုပ်နှောင်ထားခွင့် ရှိသည် ဟု ဆိုသည်။
ဤသို့ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းသည် ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သူမ၏ပါတီက စစ်အစိုးရကို ကန့်ကွက်နေသည့်အကြားမှ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
"ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချက်ကြောင့် ဆွေးနွေးတာလို့လည်း ပြောတယ်" ဟု ၀ါရင့်ရှေ့နေကြီးက ပြောသည်။
နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လွန်ခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလအတွင်း သူမ၏ ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းမှတဆင့် ချုပ်နှောင်ထားမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး လျှောက်လှဲမှု ပြုခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း စစ်အစိုးရက တစုံတရာ တုံ့ပြန်မှုမပြုသည့်အပြင် ဦးကြည်ဝင်းကိုလည်း ဒေါ်စုနှင့် တွေ့ဆုံခွင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။
ဦးကြည်ဝင်းက သူ၏ အမှုသည်နှင့် တွေ့ဆုံခွင်ပြုရန် ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးသို့ နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် လျောက်ထားခဲ့သော်လည်း လစ်လျူရှုခံခဲ့ရသည်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် အနိုင်ရခဲ့သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ခေါင်းဆောင်မှာ လွန်ခဲ့သည့် ၁၉ နှစ်အတွင်း ၁၃ နှစ်ကျော် အချုပ်အနှောင်ဖြင့် နေခဲ့ရသည်။
လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ စွပ်စွဲချက်ကို စီအန်အက်ဖ် ငြင်းဆို
မုံပီး ဇန်နဝါရီလ 29 2009
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ ချင်းပြည်သူများအပေါ် ဖိနှိပ်ငြင်းပမ်းမှုများ ပြုနေသည်ဆိုသော လူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့၏ စွပ်စွဲချက်ကို ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖြစ်သော ချင်းအမျိုးသား တပ်မတော်က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပယ်ချလိုက်သည်။
နယူးယောက်အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာထဲတွင် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံနေရသော ချင်းပြည်သူများမှာ ချင်းလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ကြောင့်လည်း ထပ်လောင်း ဒုက္ခရောက်ကြရသည်ဟု ပါရှိသည်။
စာမျက်နှာ ၉၃ မျက်နှာရှိ " မေ့လျော့ခံ ပြည်သူများနှင့် တူပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင်လည်း မလုံခြုံ- အိန္ဒိယကလည်း အကာအကွယ်မပေး" ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည့် အစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာစစ်တပ်နှင့် အစိုးရ၀န်ထမ်းများ၏ အာဏာ အလွဲသုံးစားပြုမှုကို ချင်းပြည်သူများကို အမြဲတစေ ခံစားရသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
မတရားဖိနှိပ်ခြင်းများတွင် အဖိုးအခမပေးဘဲ လုပ်အားခိုင်းစေခြင်း၊ ဥပဒေမဲ့ ထင်တိုင်းကြဲ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်း၊ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်း၊ ဘာသာရေးကိုးကွယ်ခွင့် ကန့်သတ် တားဆီးခြင်းနှင့် အခြားသော အခြေခံ လွတ်လပ်ခွင့်များ တားမြစ်ပိတ်ပင်ခံရသည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်မှသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း လူပေါင်း ၁၄၀ ကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းကာ သုတေသနပြုခဲ့ခြင်းမှ ထွက်ပေါ်လာသော အစီရင်ခံစာက စီအန်အက်ဖ် ခေါ် ချင်းလက်နက်ကိုင်တပ်၏ အပြုအမူကလည်း ချင်းတို့ကို ပိုမိုအထိနာအောင် ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က " စီအန်အက်ဖ်/စီအန်အေ အဖွဲ့ရဲ့ တချို့ အဖွဲ့ဝင်တွေက ရွာသားတွေဆီကနေ ဆက်ကြေးကောက်တယ်၊ နှောက်ယှက်တယ်၊ ရိုက်နှက်တယ်၊ ပြီးတော့ တခြား ဖိနှိပ်မှုတွေပါ လုပ်တယ်" ဟု ရေးသားထားသည်။
သိုသော် စီအန်အက်ဖ်၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ပေါ်လ်စမစ်က စွပ်စွဲချက်များကို ပယ်ချလိုက်ပြီး စီအန်အက်ဖ်ကို မလိုမုန်းထားသည့် လူတစု သို့မဟုတ် တဦးတယောက်က ပံ့ပိုးပေးလိုက်သည့် အချက်အလက်များကို အခြေခံထားသည့် အစီရင်ခံစာဟု တုံ့ပြန်လိုက်သည်။
စီအန်အက်ဖ်၏ မကောင်းကြောင်းကို ပြောမည့်သူများကို အဓမ္မခိုင်းစေ ဖြေဆိုစေခြင်းများ ရှိနိုင်သည့်အတွက် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ အနေဖြင့် ဂရုစိုက် လူရွေး မေးမြန်းသင့်ကြောင်း ပေါလ်က မဇ္ဈိမသို့ တယ်လီဖုံးမှတဆင့် ပြောကြားသည်။
"မြန်မာပြည်မှာ လူအများစုက ကြောက်စိတ်နဲ့ နေနေရတာ၊ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတာ မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အမြင် မြင်အောင် လုပ်ခံထားရတာ" ဟု ပေါလ်က ပြောသည်။
" ဒါကြောင့် HRW (လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့် လေ့လာရေးအဖွဲ့) အနေနဲ့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ထဲထဲဝင်ဝင် နားလည်အောင်လုပ်ပြီး အင်တာဗျူးတဲ့အခါ သေသေချာချာ လူရွေးချယ်သင့်တယ်"
တအိမ်ထောင်လျှင် ကျပ် ၃ ထောင်ကျ စီအန်အက်ဖ်က နှစ်စဉ် ကောက်ခံကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိသည်။ အများစုသော ကျေးရွာသားများမှာ ငွေမရှိ၍ ရှိစုမဲ့စုလေးများ ရောင်းချပေးကြရသည်ဟု ဆိုသည်။
"တခါတလေမှာ မလှူတဲ့လူတွေကို ရိုက်တာ၊ နှက်တာတွေ လုပ်တယ်။ အများစုကလည်း ကြောက်တော့ ပိုက်ဆံပေးလိုက်တာပေါ့" ဟု ရွာသားတဦး၏ ပြောကြားချက်ကို လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က ကိုးကားထားသည်။
စီအန်အက်ဖ်အနေဖြင့် ရွာသားများထံမှ အခွန်ကောက်ခံသည် ဆိုခြင်းကို ပေါလ်က ၀န်ခံသော်လည်း နိုင်ထက်စီးနင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိပါဟု ပြောသည်။ စီအန်အက်ဖ်အနေဖြင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိ အိမ်ထောင်စုတစုလျှင် ငွေကျပ် ၃ ထောင် ဆက်ကြေး ကောက်ခံခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ၁၀ ကျပ်သာ အလှူခံတော့သည်ဟု ပေါလ်က ပြောသည်။
"လူတွေကို ရိုက်နှက်တာ အနိုင်ကျင့် ငွေတောင်းတာတွေ မလုပ်ရဘူးဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ဝင်တွေကို တားမြစ်တဲ့ စည်းကမ်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ တကယ်လို့ တယောက်ယောက်က အဲသလိုတွေ လုပ်တယ်ဆိုရင် အရေးယူပါတယ်" ဟု ပေါလ်က ပြောသည်။
သို့ပေမယ့်လည်း စစ်အစိုးရက စီအန်အက်ဖ်၏ လှုပ်ရှားမှုကို မျက်ခြေမပြတ် ပစ်မှတ်ထားနေခဲ့ပြီး ကျေးရွာသားများ စီအန်အက်ဖ်နှင့် အဆက်အသွယ် မလုပ်ရန် အကြပ်ကိုင်နှိပ်စက်ကာ လူအများ စီအန်အက်ဖ်ကို မုန်းလာအောင် ကြောက်စိတ်သွင်းပေးခဲသည်ဟု ဆိုသည်။
"ပြီးတော့ တချို့ကလည်း စီအန်အက်ဖ်နာမည်သုံးပြီး ခြိမ်းခြောက် ငွေညှစ်တာတွေ လုပ်တတ်တယ်၊" ဟု သူက ထပ်ပြောသည်။
လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ အနေဖြင့် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများနှင့် စီအန်အက်ဖ်အပေါ် မလိုတမာ စွပ်စွဲချက်များကို တိုင်းတာနှိုင်းယှဉ်ခြင်းတော့ မလုပ်ထိုက်ဟု ပေါလ်က ပြောသည်။
မြန်မာစစ်တပ်၏ အဓမ္မ လုပ်အားပေးခိုင်းစေမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတော်မတရားပြုမှု၊ နှိပ်စက်ငြင်းပမ်းမှုနှင့် တရားဥပဒေမဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်းတို့ကြောင့် ချင်းလူမျိုး အများအပြား အိမ်နီးချင်း အိန္ဒိယသို့ ထွက်ပြေးကြရာတွင်လည်း ဒေသခံ လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့်လည်း ထပ်မံကြုံရပြန်သည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း တောင်တန်းများပေါ်တွင် နေထိုင်ကြသော ချင်းတို့မှာ ၂၀၀၆ နှစ်ကုန်ပိုင်းကတည်းက ကြွက်သောင်းကျန်းမှုကြောင့် ပြည်နယ်အတွင်း အစာရေစာ ရှားပါးခြင်းလည်း ထပ်မံကြုံတွေ့နေရသည်ဟု အစီရင်ခံစာက ရေးသားထားသည်။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်၏ အပြောအရ ချင်းပြည်နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စားနပ်ရိက္ခာသုံးစွဲမှု အနည်းဆုံး ဒေသဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
ချင်းတို့၏ ကံကြမ္မာဆိုးနှင့် ပတ်သက်၍ လူအချို့ကသာ အလေးထား ဂရုစိုက်ကြောင်း လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က ပြောသည်။
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ Jan,29th,2009
( 54 )၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စစ်အစိုးရ လိုက်လံစည်းရုံးနေ
( 53 )HIV/AIDS patients driven out from Rangoon
( 52 )ရိုဟင်ဂျာအရေး စစ်အစိုးရ၌ တာဝန်ရှိကြောင်း လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ကဆို
( 51 )Police seize heroin from Rangoon port
( 50 )မယ်လစခန်းရှိ ဒုက္ခသည်ပိုင် ပစ္စည်းများကို ထိုင်းစစ်တပ် သိမ်းယူ
( 49 )NLD brass demands meeting with Aung San Suu Kyi
( 48 )UN 'positive' about access to Rohingya boatpeople
( 47 )ရန်ကုန်မှာ ထူးထူးခြားခြား မြူနှင်းများကျ လှေ၊ ယာဉ် အသွားအလာရပ်
( 46 )Rohingyas beg not to be sent back to Myanmar
( 45 )ရိုဟင်ဂျာများ ကုလနှင့် တွေ့ရမည်
( 44 )ရှမ်းခေါင်းဆောင် ဦးရွှေအုံး ပါတီဖွဲ့မည်
( 43 )Rohingyas allege more Thai abuse
( 42 )၀ နှင့် စစ်မစိုးရ တင်းမာမှု တိုးလာနေ
( 41 )Thailand Agrees "In Principle" To UN Access To Migrants
( 40 )Go Gambari, but Don't Expect Much
( 39 )ဒေါ်စုကို ဝေဖန်ချက်ဖြင့် ဂျာနယ်ပွဲဦးထွက်
( 38 )Suu Kyi, Gambari Likely to Meet
( 37 )အေရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်းတွင် ဘိန်းဖြူ (၃၈) ကီလို ဖမ်းမိ
( 36 )တနေ့တည်း ဂျာနယ်အသစ် (၄) စောင်ထွက်
( 35 )Veteran Shan Leaders Plan New Political Party
( 34 )HIV/AIDS ဝေဒနာသည်များကို ရန်ကုန်မြို့မှ နှင်ထုတ်
( 33 )Thai FM Meets with UNHCR to Discuss Rohingya
( 32 )လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ စွပ်စွဲချက်ကို စီအန်အက်ဖ် ငြင်းဆို
( 31 )Ordeal at Sea Described by Rohingya Survivors
( 30 )ချင်းဒေသ လူ့အခွင့်အရေး ချိုဒဖောက်ခံရဆဲ
( 29 )ရိုဟင်ဂျာအရေး ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်း
( 28 )Boat people arriving in Thailand not from Myanmar
( 27 )ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းပြပြီး နအဖက ရခိုင်ပြည်နယ်စည်ရုံး
( 26 )No end to miseries for Myanmar's ethnic minorities
( 25 )ဒေါ်စုနှင့် ဆွေးနွေးခွင့်ပေးရန် အန်အယ်ဒီက တောင်းဆို
( 24 )KBS to shoot documentary on Myanmar Buddhism
( 23 )လှေစီး ဒုက္ခသည်များအရေး မပြေလည်သေး
( 22 )Myanmar faces food shortage
( 21 )ဘိုကလေး မြို့မဈေး အမိုးအကာနဲ့ လုံလုံခြုံခြုံ ပြန်ဆောက်ပေးစေလို
( 20 )ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးကို လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်
( 19 )EU experts to help improve Myanmar marine products export quality
( 18 )Food Access Difficult In Post-Cyclone Myanmar
( 17 )Refugee problem needs joint action by governments
( 16 )Myanmar held over passport scam
( 15 )Couple held for forging work permits
( 14 )စားနပ်ရိက္ခာပြတ်လပ်မှုမြန်မာပြည်ကြုံမည်
( 13 )The Rohingya,aMuslim minority group from Myanmar
( 12 )မယ်လစခန်းကို ထိုင်းအာဏာပိုင် ရှောင်တခင် ၀င်ရောက် စစ်ဆေး လျှပ်ပစ္စည်းနှင့် ဆိုင်ကယ်များသိမ်းဆည်း
( 11 )Chin 'living in slavery'
( 10 )ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်က လယ်ကိမ်းခံရသော လယ်သမားတွေ အခက်တွေ့
(9)66 migrants convicted
( 8 )အစိုးရနဲ့ သူပုန်တွေရဲ့ဒဏ် ချင်းလူမျိုးတွေ ခံစားနေရ
(7)Rohingya Muslim minority fleeing persecution in Myanmar
(6)The Rohingya,aMuslim minority group from Myanmar
(5)စပါးဈေးကျသော်လည်း ဆန်ဈေးမကျ
(4)Thai court convicts 66 Rohingya migrants
(3)'Six million Burmese need food'
(2)ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များ နိုင်ငံမှ ထွက်ခွာရန် ထိုင်းတရားရုံး ဆုံးဖြတ်
( 1 )Rohingya migrants face court and eventual expulsion
၂၀၁၀ ခုနှစ်ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာအမြင်နှင့် မြန်မာနိုင်င...
DKBA တပ်ရင်း (999) လုံခြုံရေးဖြင့် လူလတ်ပိုင်းနှစ်...
နာဂစ်ထိ ရန်ကုန်ကျောင်းများ ကျပ်သန်း ၃ ထောင်ကျော်ကု...
(၇) ကြိမ်မြောက်မွန်ပြည်သစ်ပါတီညီလာခံမှ ဆုံးဖြတ်ချက...
စုလွတ်မြောက်ရေး လူထုအားနဲ့ထောက်ခံဖို့ အန်အယ်လ်ဒီ တ...
ဗမာစစ်အစိုးရ လေကြောင်းကာကွယ်ရေးအတွက် လက်နက်သစ် ၀ယ်...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ပျက်ပြားနိုင်ဟု နအဖ စစ်ဗျူးဟာမှူ...
စစ်အစိုးရ တရားရုံးများ တိကျမှန်ကန်သည့် တရားစီရင်ရေ...
ကြွက်နှင့် မုန်တိုင်းကြောင့် မြန်မာပြည်တွင် ရိက္ခာရ...
စစ်အစိုးရအကြီးအကဲများကို ကြိုဆိုနေရသဖြင့် ကလေးများ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အန်အယ်လ်ဒီ တွေ့ခွင့်မပေးလှ...
ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ယာမြေများအား အာဏာပိုင်များ သိမ်...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ Jan,28th,2009
ယမန်နေ့ ညနေက နေ့ကြတ်(နေကြတ်ခြင်းသည် အတိတ်နမိတ်မကော...
ကမ္ဘာမြေ၏ နိဂုံး (The End of the World)
နအဖ စစ်ဖက်ရေးရာ လုံခြုံရေး အရာရှိနှင့်အဖွဲ့ ၀ဒေသအတ...
ပရီပေးကတ်ကြောင့် ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်း ဆက်သွယ်ရ ခက်ခဲလာ
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ကုလအထူးသံ သွေးတိုးစမ်းဦးမည်
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ Jan,27th,2009
၀ါရှင်တန်သံအမတ်ဟောင်း ဦးလင်းမြိုင်ကိုနအဖက အမေရိကန...
စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်မှုကို စစ်အစိုးရ ဘာကြောင့် ကြောက်ရသလဲ
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ Jan,26th,2009
ပွင့်အန်ထွက်လာသော စကားလုံးများ (သို့မဟုတ်) ယဉ်ကျေး...
ဦးသန့် သို့မဟုတ် မီးလျှံကြားက ကြာပန်းတပွင့်
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ Jan,25th,2009
တိုင်းမှူးကတော်မှ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး ရန်...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ Jan,24th,2009
မဲဆောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရာချီအဖမ်းခံရ
မြန်မာငွေ ရုတ်တရက် မာ၊ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းတချို့ ရပ်ဆိုင်း
ဧည့်လာရန်သာ အရေးကြီးဟု ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များပြော
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ Jan,23th,2009
ပါရမီတက္ကစီ ဗိုလ်မှူးချုပ်တွေသာ ရောင်းမည်
နဝတ စီးပွားရေး လုပ်နေသည်
မောင်တောတွင် လုံခြုံရေး အထူးတင်းကျပ်
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ Jan,22th,2009
မြန်မာဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအပေါ် တရုတ်၏ သြဇာမှေးမှိန်သ...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် အလွန်ကာလသို့
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ Jan,21th,2009
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် “အမှန်တရားစိတ်ဓာတ် နှိုးဆော်သူဆု” ရ
တောထဲပုန်းရှောင်နေသည့် အလုပ်သမားများ အခက်အခဲများနှ...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ Jan,20th,2009
SSA (တောင်ပိုင်း) နှင့် နအဖ တပ်များ တိုက်ပွဲများြ...
ဆိုင်ကယ်ထိခိုက်မှုကြောင့်နေပြည်တော်တွင် တနေ့ လူ (၈)...
ဂွဏ်းခေါ် - အင်ဒီဖဲန်းဒဲန့်စာစောင်လက်ဝယ်ရှိသူ မူဆယ်...
ပုဂံညောင်ဦး တောင်ကူးမြောက်ပြေး စီးပွားရေးသံသရာ
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ Jan,19th,2009
အရှင်ဂမ္ဘီရ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေပြီး ကျန်းမာရေးအခြေအနေဆိ...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ Jan,18th,2009
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းနှင့် လိပ်ပြာ အကျိုးသက်ေ...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြည်သူများကို နည်းမျိုးစြုံ...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ Jan,17th,2009
မြန်မာအလုပ်သမားများ နေအိမ်ဖျက်ပြီး တောထဲတွင်ပုန်းေ...
၂၀၀၉ နှစ်သစ်မှာ သူတို့ဘာလုပ် ကြမလဲ
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ Jan,16th,2009
ပူတာအိုထောင်က ကိုအောင်သူ ကျန်းမာရေးမကောင်း
ဆန္ဒပြ အန်အယ်လ်ဒီလူငယ် (၆) ဦး ပြန်လွတ်(၃) ဦးကို ဆ...
ယခုနှစ် ဘွဲ့တံဆိပ်တော်လျှောက်သည့် သံဃာနည်းပါးဓမ္မကထ...
၈ လ ကြာသော်လည်း အကူအညီများ လိုအပ်နေဆဲ နာဂစ်ဒေသ